Auto CAD Tips & Tricks [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချဆော့ဖ်ဝဲများအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်များ > Sticky---------ဖတ်ပေးပါ.. > AutoCAD > Auto CAD Tips & Tricks
View Full Version : Auto CAD Tips & Tricks
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ပုံဆွဲရပြီဆိုရင် သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်းပြီးအောင်ဆွဲဖို့ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ဆွဲနှုန်းကိုမြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဒီတော့ toolbar က icon တွေကနေ command တွေခေါ်ပြီးသုံးရင် အချိန်ပိုကြာတယ်လေ။ AutoCAD keyboard shortcut တွေနဲ့ သာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးမြန်မြန် ဆွဲနိုင်တာပေါ့။ AutoCAD မှာပါတဲ့မူလ shortcut တော်တော်များများကသူ့ ဟာနဲ့ သူ အိုကေပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ command လေးတွေကို တော့ကိုယ်နဲ့ လက်သင့်ရာလေးတွေ ပြင်ပြီးသုံးချင်တတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပါ။
Tools &gt; Customize &gt; Edit Program Parameters (acad.pgp) ကို click လိုက်ပါ။
Notepad file တစ်ခုပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီထဲမှာ AutoCAD ရဲ့ မူလ command အားလုံးပါပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကိုယ်အသစ်ထည့်ချင်တဲ့ command ကို ထပ်တိုးပြီး save လိုက်ပါ။
ဥပမာ ။ ။ CO, *COPY
C, *COPY (အသစ်ဖြည့်ထားတာပါ)
မူလအတိုင်း CO နဲ့CP ကိုသုံးနိုင်တဲ့ အပြင် C ရိုက်ရုံနဲ့ လည်း copy command ဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲ....save ပြီးသွားရင်တော့နောက်ထပ်လုပ်စရာလေးတစ်ခုကျန်ပါတယ်။ command line မှာ &quot;reinit &quot; လို့ ရိုက်ပေးပါ။ Re-initialization dialog box လေးပေါ်လာရင် PGP File ဆိုတဲ့check box လေးကို click ပေးပြီး ok လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပြင်ထားတဲ့ command တွေသုံးနိုင်ပြီပေါ့။
မKPZ အခုလိုသေချာဆွေးနွေးမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ..
တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်တွေပါပဲ ဆက်လက်မျှဝေပေးပါဦးနော်..
Save ဆိုလို. autocad save ၇ဲ. လူသိနည်းတဲ. save အကြောင်ပြော ကြည့်မယ်နော်.....
File 1 ခုnew တောင်းပြီး menu ကပဲဖြစ်ဲဖြစ် ၊ command line ကပဲဖြစ်ဲဖြစ် ၊ Ctrl +S နှိပ်တာပဲဖြစ်ဲဖြစ် &quot;save as&quot; dialog box ကျလာပြီိး name ပေး save ၇ပါတယ်။Save ပြီးတဲ. ဘယ်file ဖြစ်ဖြစ် command line မှာ &quot;save&quot; လို. ရိုက်ကြည်.၇င် &quot;save as&quot; dialog box ကျလာပြီိး name ပေးပြီး save ၇င်
အဲဒီ new file က save တဲ. path အတိုင်း save ပြီးး autocad မှာ နဂို file ပဲ ဆက် ရှိနေ မှာနော်။Original Save as နဲ. ပြောင်းပြန်နော်။But you must do type &quot;save&quot; in command line.နောက် 1 ခုက autocad မှာ file2or3or4files...etc (eg...3 files) ဖွင်.ပြီိး files 1 ခု စီတိုင်း ကို new geometry (eg...rectangle or line or circle..) ဆွဲပြီး ကြိုက်တဲ. file ထဲ မှာ command line &quot; saveall &quot; လို. ရိုက်ပြီး autocad ကို ပိတ်ပါ။ပြီိး၇င် ခုနက files တွေကို check လုပ်ကြည်.၇င် နောက်ဆုံး ဆွဲ ထားတဲ.အတိုင်း တွေ.၇ပါမယ်။Files အများကြီး ကို 1 ခါထဲနဲ. save တာနော်။
:P ကိုယ်က BE (Mechanical) တစ်ယောက်ပါ။အခုလို autocad အကြောင်း ဆွေးနွေးပေးတာ အားလုံးကို ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လဲ အသစ် အသစ်တွေကို ထပ်ပြီးသိချင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်က အခုမှ စလေ့လာနေတုန်းမို့ပါ။ အသိပညာတွေ မျှဝေပေးဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ပုံတွေကို လေ့လာချင်ပါတယ်။ Thanks alot for all.
လုပ်ငန်းခွင်က ဘယ်လိုပုံမျိုးကို သိချင်တာပါလိမ့်
ဒီတစ်ခါ autocad version တွေအကြောင်းပြောကြည့်မယ်နော်။Autocad ကအ၇င်က release version အနေနဲ့ ထုတ်ခဲ.တယ်။Release 1 ,R 1.2...,R 2,
R 3, R3.1 ......R14စသဖြင်.ပါပဲ။ကျွန်တော် R 14 ကစပြောမယ်နော်။R14 ပြီးတော.autocad 2000,2002 အဲဒါတွေကတော.(R 15 နဲ. R 15.1)ပါပဲ။Autocad 2004 , 2005,2006 တွေက (R16,R 16.1,R 16.2) နဲ. Autocad 2007,2008,2009 (R 17, R 17.1 ,R17.2)။ပြောချင်တာက Release number တူ၇င် file type version အတူပါပဲ။ Example ...autocad 2004 နဲ. 2005 ,2006 file တွေကို version မြင့်တာနှိမ့်တာစဉ်စားစရာမလိုပဲ အပ်ြအလှန် ဖွင်. နိုင်တယ်။Release version number မတူမှ သာ file type ကို version change ပြီး save လုပ် သုံးရမှာပါ။Example ...autocad 2009 file type နဲ. save ထားတဲ. file ကို autocad 2004 to 2006 မှာ ဖွင်.ချင်၇င် autocad 2009 save dialog box ရဲ. file type မှာ autocad 2004 (Release 16)ကို save လုပ်ပြီး သုံးနိုင်မယ်။ကဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Drawingတစ်ခုကို ပြုပြင်ဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုတာများလေ့ရှိတဲ့ Symbol, Instrument, Member တွေကို Block လုပ်၍ အသုံးပြုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ထို့နောက် Insert Command ကိုအသုံးပြု၍ Drawing ထဲတွင် ခေါ်ယူအသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်။ ပထမဦးစွာ Block တစ်ခုကို မည်သို့မည်ပုံ ဖန်တီးသည်ဆိုတာကို လေ့လာကြရအောင်။ AutoCAD 2009 မှာတော့ Block&amp;amp;Reference ဆိုတဲ့ Menu Bar တစ်ခုပါဝင်လာတာကြောင့် Block လုပ်ရတာပိုလွယ်လာပါတယ်။
Autocad ဆွဲရင်းနဲ. layers တွေလဲ 2ခု 3ခု ၊blocks...textstyle...dimstyle...စသဖြင်. နံမည်ပြန်ပေးစရာ(rename လုပ်ဖို.)များ နေရင်
တစ်ခုချင်းစီ သွားလုပ်၇င် အချိန်ကုန်ပါတယ်။မြန်အောင် လို. command line မှာ &quot;rename&quot;လို. ရိုက်လိုက်တာနဲ. DialogBox တစ်ခုကျလာပြီး
left side မှာ rename လုပ်လို.၇တဲ. types တွေနဲ. right side မှာ left side ကရွေး ထားတဲ. current types မှာပါတဲ.. detail တွေ၇ဲ.name တွေနဲ.
အမြန် rename ပြန်ပေးလို.၇ပါတယ်။
Autocad မှာ ပုံမှန်ဆို file တွေအများကြီး ဖွင်. လို.၇တယ်။ တစ်ခါ တစ်၇ံ file ၁ ခု ပဲဖွင်. လို. ၇တာမျိုး ဖြစ်ခဲ.၇င် command line မှာ &quot;sdi &quot; enter &quot;1&quot; enter
ဆို၇င် original အတိုင်း multiple open ပြန်ဖြစ် မှာပါ။ SDI means (single drawing interface) value (0,1) means on/off.
စာလုံးတွေကို အ၀ိုင်းပုံ၊ arc ပုံကွေးလို့ရပါသလား။
ဥပမာ..Nadi Trading Co.Ltd ဆိုတဲ့ စကားစုကို 1.5 အချင်းရှိတဲ့
express tools ကနေရတယ်နော်။
arc text နဲ့လုပ်လိုက်တယ်...ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းတော့အခက်တွေ့နေတယ်။
(အကောင်ပြတာတောင် အရိပ်မမြင်ဘူး) ;D ;D ;D
အောက်ဖက်အ၀ိုင်းကျတော့ စာကဇောက်ထိုးဖြစ်နေရော.. ;D ;D ;D
try ကြည့်ဦးမယ်အကို mr zaw ရေ...
အချိန်ရရင် ထပ်ပြောပြဦးနော်။ :) :) :)
arc နဲ့ဝိုက်တာရပေမယ့် စာက ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်(ဇောက်ထိုးပေါ့နော်) :-\_ :-\_ :-\_
Ohh...I got it! :D :D :D
အဲဒီ express tool ထဲက &quot;TEXT&quot; explode သုံးပြီး Extrude လုပ်ကြည်ူပါလား။
Acad 2009 Ribbon မှာ &quot;express tool &quot; menu တင်တဲ့ method ပါ။
change ဆိုတဲ. command ကိုသုံးကြည်.ပါ။ select object တောင်းတဲ.အခါ ကိုယ်.၇ဲ. dwg မှာ ရှိပြီးသား object (eg..solid , line ,circle ,...surface...etc)ကြိုက်၇ာေ၇ွးပြီး သူ.၇ဲ. layer , color ,..elevation....etc..change နိုင်ပါတယ်။
မိမိလက်ခံ ရရှိတဲ့ အော်တိုကဒ်ပုံက မိမိမှာသုံးနေတဲ့ version ထက် မြင့်တဲ့ version နဲ့ ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေ ဖြစ်နေလို့ ဖွင့်လို့ မရတာတွေ ဖြစ်လာရင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဆော့ဝဲလ်ဟာ AutoCAD R14, AutoCAD2000, 2004 နှင့် 2007 စတဲ့ဗားရှင်းတွေမှာသာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 2008 နှင့် 2009 တွေမှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Convert လုပ်လိုက်တာနှင့် တစ်ပြိုင်နက် မူရင်းဖိုင်ကို ဖုံးအုပ် ( Overwrite ) သွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် မဖြစ်စေလိုလျှင် ကော်ပီ လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံလေးက လွယ်ကူပါတယ်။
၁) ဒီ Software လေးကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး အင်စတော လုပ်ပါ. (http://www.uploadjockey.com/download/390627/dwgtrueconvert.rar)
၂) ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့ AutoCAD file ကို add ပါ.
၃) ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့ version ကို အောက်မှာ ရွေးပါ...
၄) ပြီးရင် convert ကို click လိုက်ရုံပါပဲ..
I can&#039;t do like that because although all I have done is ok before trying to type that command on the command line, it appears on the command line to ask for pressing F1 for help. I don&#039;t know how to continue and please let me know.Thanks in advance.
Select all and Ctrl+Shift+U ::)
ဒီတစ်ခါ UCS plan အကြောင်းပြောကြည်.မယ်နော်။ပုံ A ကလိုမျိုး L ချိုးအဆောက်အဦးတွေ၇ဲ. Portigo elevationတွေ 2d drawing ဆွဲတဲ.အခါ Projection line တွေဆွဲထုတ်၇ ပုံကို rotate လှည်.၇နဲ. Design များလေ ဆွဲ၇တာ ကြာလေလေနဲ.အဆင်မချောတတ်ပါဘူး။Autocad model space screen ကို ဆွဲလှည်.လိုက်၇င် Ucs ၇ဲ. x or y direction ဟာကိုယ်လိုချင်တဲ.အစောင်း အတိုင်းအမှန်ဖြစ်သွားပြီးဆွဲရလွယ်သွားပါပြီ။ဥပမာပုံလေးအတိုင်းလုပ်ကြည်.၇င်
1.ပုံ A က portigo မှာ Red line ဆွဲထားပါတယ်။
2.ပုံ B ကအတိုင်း UCS ကိုလှည်.ပါ။(&quot;ucs&quot; enter &quot;e&quot; enter and selectared line)or (you can use with3point UCS like that)
3.ပုံBကအတိုင်း ၇ပြီဆို၇င် &quot;plan&quot; enter.. enter ..ခေါက်လိုက်၇င် ပုံ C ၇ပါပြီ။..အဲဒီမှာ portigo elevation ကို ကောင်းကောင်းဆွဲလို.၇ပါပြီ။
နဂိုမူလ UCS အတိုင်းပြန်၇ချင်၇င်..&quot;plan&quot; enter &quot;w&quot; enter ပါ။.ူ :P :P :P
ပုံ A ကိုပြန်ရောက်အောင်ကော လုပ်လို့ရလားဟင်.. :-\_ :-\_ :-\_
ပုံ C ကနေလေ... ;D ;D ;D
ကျွန်တော် အောက်ဆုံးမှာေ၇းထားပါတယ်။
command line မှာ &quot;plan&quot; enter &quot;w&quot; enter...ဆို၇င်၇ပါပြီ..မ၇၇င်အကြောင်းပြန်ပါခင်ဗျာ။
ရှဲ ရှဲ X 100 ....
Autocad မှာ Hatch ခြယ်တဲ့အခါ ဥပမာ အုတ်ကွက်(brick patttern)ဆိုပါဆို့ ...အမြင်မှာကြည့်ကောင်းအောင်ခြယ်ပြီး
dimension တိုင်းလို့အတိအကျတိုင်းဖို့မလွယ်ပါဘူး။snap မှ hatch ကိုကောက်လို့မရတာကို!...
snap point ကောက်လို့ရမယ်ဆိုရင်..eg..အုတ်အလျား 9&quot; နဲ့ချိန်ပြီးတိုင်းမယ်ဆို ကိုယ်ခြယ်တဲ့ hatch က actual လို တွက်ခြယ်လို့ရရင်
ok ပေါ့နော်။ဒီလို hatch တွေကို snap point ဖဖ်းချင်ရင် command line မှာ &quot;osnaphatch&quot; လို.ရိုက်ပြီး ..value ကို &quot;1&quot; ရိုက်ပါ။
ဒါဆို hatch pattern ကို snap point ကောက်လို့ရပါပြီ။.... :) :)
အရင်ဆုံး command line မှာ note pad+enter\_enter ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါ။ note pad ကျလာလျှင် -layer m 1 c 1 m2c2m3c3m4c4m5c5m6c6m7c7m 8 c 8 m9c 9
ဆိုပြီးရိုက်ပါ။အဟီး မိတ်ဆွေနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒီလိုဗျ၊စာဖတ်သူကနေcommand line မှာ notepad+enter\_enter ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရင် note pad တစ်ခုကျလာမယ်။အဲဒီအခါကျရင်-------(သေချာဂရုစိုက်ပြီးဖတ်ပါ)-layer (space bar)m (space bar)1 (space bar)c (space bar)1 (space bar) (space bar)m (space bar)2 (space bar)c (space bar)2 (space bar) (space bar)enter ဆိုပြီးရိုက်ပါ။ပြီးရင် file/save လုပ်ပါ။name ပေးရင်တော့ layers.scr ဆိုပြီးသိမ်းပါ။ ပြီးရင် autocad ထဲပြန်သွားပြီး command line ကနေ script ဆိုပြီးရိုက်ပါ။box ကျလာရင်ခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ file ကိုလမ်းကြောင်းပေး select ပေးပြီး open ပါ။ဒါဆိုရင် layer ၂ခုအလိုအလျောက်ကျလာပြီပေါ့။အဲဒီလိုနည်းနဲ့ layers တွေကိုအများကြီးလုပ်ထားပြီးကိုယ် new file တစ်ခုယူလိုက်တိုင်း script+enter ဆိုပြီးလုပ်လိုက်တိုင်း ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ layers တွေချက်ချင်းကျလာမှာပေါ့။သူ့ရဲ့အသုံ့းပြုပုံလေးကဒီလိုပါ။
ကျွန်တော်တို့ command line မှာဆိုရင် -layer+enter\_m(make)+enter\_layer1(name)+enter\_c(color)+enter\_1(color number)+enter\_enter(previous command)\_m(make)+enter\_layer2(name)+enter\_c(color)+enter\_2(color number)+enter\_enter(previous command)\_m(make)+enter\_layer3(name)+enter\_c(color)+enter\_3(color number)+enter\_enter(previous command)\_enter(အဆုံးသတ်ချင်ရင် enter တစ်ချက်ပိုခေါက်ပေး)
ဒါလေးကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအေးဆေးပေါ့။ဒီ script လေးဟာအရမ်းအသုံးဝင်တယ်နော်။အားလုံးပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ကြပါလို့ပြောရင်း၊တော်ပြီဗျာ type ရတာလက်ညောင်းလာဘီ။ ကျွန်တော်ကမြန်မာ typing မကျွမ်းဘူးဗျ။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
:) :)အခုလို sharing လုပ်တာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။..အခု friend ရေးခဲ့တဲ့ post လေးတွေကို ရော နောက်အဲဒီလိုမျိုးရေးခဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် &quot;Auto CAD Tips &amp; Tricks &quot; ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာရေးပေးပါနော်။ကျွန်တော်တို့ items တူတာလေးတွေအတွက် ခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲ ထားတာ friend သေချာကြည့်
ရင် တွေ့မှာပါ။အဓိကတော့ မလိုအပ်ပဲ post ခေါင်းစဉ်တွေများရင် web site မလေးစေချင်လို့ပါ။ :) :)
ဒီပိုစ့်နဲ.ပါတ်သတ်ပြီးတစ်ခုလောက်မေးပါရစေ...ကိုချေးထုတ်ပြောသလို notepad တွေဘာတွေနဲ့ layer ဖွဲ.မနေပဲ layer အစုံပါတဲ့ Cad File တခုအသေသိမ်းထားပြီး Layer အသစ် ဆောက်မဲ့ File ထဲကို Paste လုပ်လိုက်ရင်လဲဖြစ်တာပဲမဟုတ်လား? အဲ့လိုနဲ့ Files အသစ်ဟာ Layer စုံသွားရောမဟုတ်လား? နောက်မှမလိုတဲ့ Layer ကို PU (purge) နဲ့ဖြတ်ထုတ်ပေါ့...အဲ့နည်းကပိုမလွယ်ဘူးလား? ??? ???
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ dwg file တွေကို free ပဲ save ကြလေ့ရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် တချို့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွေမှာ..မိမိ ရဲ့ system တွေဟာ drawing တွေထဲမှာပါဝင်တာကြောင့် ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေက မိမိ drawing file တွေကို တဘက်လှည့်နဲ့ရယူပြီး လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်မှုလုပ် ပြီးကျော်တာခွတာတွေ ကြောင့် နိုင်ငံတကာက auto CAD user တွေဟာဒီအကြောင်းကို စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်... လုပ်ငန်းတခုရဲ့ main contractor ဟာ project တခုကို tender ခေါ်ပါတယ်... အဲ့ဒီမှာ sub contractor တွေဟာ အဲ့ဒိ tender ရဖို့ အပြိုင်အဆိုင် ဈေးလျှော့ပေး၊ လုပ်ငန်းအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းတွေကို သုံးရပါတယ်..လုပ်ငန်း A က အဲ့ဒိတင်ဒါကို ၁၀၀ ကျပ်နဲ့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါစို့... တင်ဒါရပြီဆိုရင် drawing တွေ approve ဖြစ်ဖို့နဲ့ project မှာ သုံးမယ့် sample တွေ approve ဖြစ်ဖို့ main con / design consultant / archi စတဲ့သူတွေဆီ drawing submit လုပ်ရပါတယ်... အားလုံး approve ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ project ကိုစတင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်... ကံဆိုးစွာပဲ sub contractor B ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်... သူက A approve ဖြစ်ခဲ့တဲ့ drawing system တွေအတိုင်းပဲ ၅၀ ကျပ်နဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့... အဲ့ဒိမှာ main con က A နဲ့ contract ကို ဖျက်ပြီး ( ၂၅ ကျပ်လောက် နစ်နာကြေးပေးပြီးတော့ပေါ့) B နဲ့ ဆက်နဲ့အကောင်အထည်ဖေါ်ပါတယ်..အဲ့ဒိဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဓိကတရားခံဟာ A ရဲ့ drawing တွေ B ဆီရောက်ရှိသွားခြင်းပါပဲ....
အဲ့ဒိလို ကိစ္စမျိုးတွေအတွက် auto desk က dwg file တွေကို password ပေးပြီးကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဖန်တီးပေးလာပါတယ်..
ဒါပေမယ့် submit လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်း e.g archi က dwg file ပဲ ရချင်ပါတယ် ဆိုရင်...
မိမိရဲ့ password နဲ့ dwg တွေကို archi စီပို့ ပြီးရင်လည်း password တခါထပ်ပေးရတာဆိုတော့ ဘာမှတော့သိပ်မထူးလှပါဝူး...
တကယ်လို့ soft copy ပဲလိုတာဆိုရင်တော့ pdf file အနေနဲ့ပို့တာက အင်မတန်ကောင်းမွန် သေသပ်လှပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်မှာ archi က လိုချင်တာ auto CAD ရဲ့ dwg file format တဲ့...
ဒါဆိုရင် တော့ dwg file ကိုပေးမယ်.. ဒါပေမယ့် မိမိ dwg file ဟာ ပြန်လည် edit လုပ်ပြီး အသုံြးဲပုလို့မရနိုင်တဲ့ pdf ဆန်ဆန် dwg file လိုမျိုးဖြစ်အောင်
ဖန်တီးထားမယ်... ကဲ အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်ပါသလား......
dwg ဖိုင်တွေကို lock တဲ့ အကြောင်းလင့်လေးတွေပါ......
www.dwgsoft.com (http://www.dwgsoft.com) ကsoftware နဲ့ lock လုပ်ထားတဲ့ dwg file တဖိုင် attach လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်..
.txt ကို rename နဲ့ဖျက်ပြီးဖွင့်ကြည့် နိုင်ပါတယ်..
အဲ့ဒိဖိုင်မှာ ရှိတဲ့ drawing ကို dwgsoft ရဲ့ software က Unname block လုပ်ပြီး lock ဖြစ်စေခဲ့တာပါ..
block name ကို *U1 ဆိုပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်...
သူကဘယ်လောက် စိတ်ချရတယ်ဆိုတာကို ချန်းချန်းစစ်ကြည့်ပါတယ်...
သေချာတာက block ref ကို edit လုပ်လို့မရနိုင်ပါဝူး...
unname block ဖြစ်နေတဲ့အတွက် auto cad က block reference editor နဲ့ဖွင့်ခွင့်မပေးပါဝူး...
auto CAD software နဲ့တော့ ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက် တာတွေမလုပ်နိုင်လို့ lock ဖြစ်ပြီလို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်.....
ချန်းချန်းက progecad software သုံးပြီးဖွင့်ကြည့်တော့ edit လုပ်နိုင်တာတွေ့ရပါတယ်..
undefine block, unname block ဒါမှမဟုတ် anonymous block တွေအကြောင်း သိတဲ့သူတွေကိုလည်း နဲနဲတော့ပြောပြဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်..
ပုံမှန်ဆိုရင် auto CAD ရဲ့ block defination dialog box ဟာ block တွေ create လုပ်ရာမှာ asterisk * နဲ့စတဲ့ name ကိုသုံးပြီး create လုပ်ခွင့်မပေးပါဝူး...
ဒါပေမယ့် anonymous block တွေဟာတော့ block name မှာ *နဲ့စပါတယ်...
* *U### - general anonymous blocks
* *E### - anonymous blocks from non-uniformly scaled blocks - when exploded (e.g. solids, regions)
* *D### - anonymous dimensions (dim blocks)
* *X### - anonymous hatches (hatch blocks)
* *A### - anonymous groups
* *T### - anonymous blocks in tables
ဒါတွေဟာ unname block တွေပါပဲ...
အလွယ်ကူဆုံးမြင်သာတာကတော့ dimension တခုကို explode လုပ်တဲ့အချိန်မှာ... auto CAD က *D ဆိုတဲ့ block တွေကို temporary ဖန်တီးပါတယ်... ဒါပေမယ့် အဲ့ဒိblock တွေကို Insert သုံးပြီး အသုံးပြုလို့တော့မရပါဝူး...
မြင်ကြည့်ချင်ရင်တော့ pure dialog နဲ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်.. purge လုပ်လိုက်ရင်တော့ ဒီblock တွေကို dwg fileကနေအပြီးတိုင်ဖျောက်ဖျက်ပေး
ပါတယ်... ဒီpost မှာ anonymous blk.dwg.txt ကို နမူနာကြည့်နိုင်ပါတယ်... txt လေးကိုတော့ rename နဲ့ဖျက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်...
ဒါတွေဟာ anonymous block တွေပါ ... ဒါပေမယ့် explode လုပ်ရင်တော့မူလ property ကို ပြန်ရပါတယ်... circle ဆိုရင် circle , text ဆိုရင်text အဲ့ဒိလိုပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...
ချန်းချန်း မြန့်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နဲ့ lock လုပ်ထားတဲ့ ( တကယ်ကတော့ edit လုပ်လို့မရရုံ ) file လေးတဖိုင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
block တခုပါ... anonymous block မဟုတ်ပါဝူး... block editor နဲ့ open လို့ရပေမယ့် explode တော့ပေးမလုပ်ထားပါဝူး....
edit မလုပ်စေချင်လို့ eidt လုပ်လို့မရရုံလေးပဲ လုပ်တာပါ.... လက်တည့်စမ်းကြည့်ဖို့ပါ...
ချန်းချန်း (mg mine)
Converting DWG File to PDF or JPEG Format
Sometimes AutoCAD drawing file i.e. DWG file need to be converted in to windows friendly format like PDF or JPEG so that the person who is not having AutoCAD also view the work. To convert DWG to PDF or JPEG the steps are:-
2-In Printer / Plotter name choose DWG To PDF .pc3 (for PDF format conversion) OR choose Publish To Web JPG .pc3 (for any JPEG format conversion)
3-Then complete the other setting as per requirement
After that AutoCAD will automatically ask to save the DWG file in PDF or any JPEG format.
ဒါလေးက တော့ မြန်မာလိုမရေးတော့ဘူးနော်။...နိုင်ငံခြားက blog တစ်ခုက တွေ့တာနဲ့ ...sharing လုပ်လိုက်တာပါ။ :)
ကျွန်တော် Office CAD Guru တွေက CAD user တိုင်းကို Send တဲ့ Training လေးတွေ ဝေမျှခွင့်ပြုပါ
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံတယ်နော် ကျွန်တော်လဲသေချာ မကလိရသေးဘူး mails တွေ save ထားတာပဲရှိတာ နောက်အားရင် လေ့လာမယ်ပေါ့ :P :P
အဲလိုနေတာ ၁နှစ်ကျော်သွားတယ် ဘာမှထူးဟူး
အထုတော့ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ဆွေးနွေးရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁နေ့ကို ၁ခုဒါမှမဟုတ် ၂ခုလောက် တင်ပေးပါ့မယ်
Easily move objects in 3D space with the move grip tool
Moving objects in 3D space has always been somewhat difficult. You could use grips, but it wasn&#039;t always easy to visualize in which direction you were moving. The MOVE command was somewhat slow and awkward for 3D moving. In AutoCAD 2008, you can manage the process more easily with the move grip tool. The purpose of this tool is to help you visualize the three axes as you&#039;re moving. Note that the default grid also helps. When you select an object, the move grip tool appears automatically (unless you&#039;re in the 2D Wireframe visual style).
1. With no command active, select an object.
2. Hover the cursor over any square grip and the move grip tool jumps to that grip.
3. To move along any axis, pass the cursor over that axis until you seeathin line (the same color as the axis) extending in both directions.
4. Click on that axis and move the cursor in either direction along the axis. You can enteradistance or click where you want the grip to go (such as an OSNAP point).
To check the current visual style, display the Dashboard (enter dashboard on the command line) and look at the active style in the Visual Styles drop-down list. If you decide that you don&#039;t ever want to use the move grip tool, you can set the GTAUTO system variable to0(zero).
lakegyi ရေ Auto CAD Tips &amp; Tricks ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဝေမျှပေးပါနော်...
အဲဒီမှာ...အခုလိုပဲ ကောင်းတာလေးတွေ ဝေမျှပေးတာလေးတွေစုထားတာပါ။
အခုဟာတော့နော် ရွှေ့ တတတ်ဘူး
နောက်ဟာတွေကို နော်အဲ့အောက်မှာ သွားရေးပါ့မယ်
ကို papagyi ရေ တိုက်ဆိုင်သွားတယ်ဗျာ
ကျွန်တော် Email ကလဲ ဒါပဲဖြစ်နေတယ်။
Training: PDF Plotting.
Everyone has to plot DWG&#039;s as PDF&#039;s at some stage, and here isafew hints how to get it to work. PDF Factory Pro isaserver based PDF plotter, in much the same way that printers are network shared, so is PDF Factory Pro.
Single or Multi sheet PDF&#039;s?
Anything plotted asaPDF whileaPDF Factory pro dialougue box is open, will be added to the PDF file open in the dialogue box. This is the core &#039;feature&#039; of PDF Factory, it is very simple to createamultisheet PDF document, however this is something we as caddies rarely want! If you want to create PDF&#039;s containing one drawing per file, you&#039;ll want to prevent PDF Factory from opening each file as it creates it.
This can be done by selecting the printer properties in AutoCAD, opening the custom properties and ticking the &#039;do not show dialog&#039; box. AutoCAD also hasavariable called PUBLISHCOLLATE which must be set to &#039;0&#039; to create single sheet PDF files. This variable controls whether AutoCAD sends publish jobs to the plotter inasingle large file (faster) or as multiple smaller files (slower). AutoCAD MUST send multiple, smaller files to the PDF plotter to produce single sheet PDF&#039;s.
When you publish drawings from AutoCAD you can selectapage setup from an included drawing and apply it to all drawings in the job, or import one from another drawing. Page setups for PDF plotting can be imported from this drawing in the CAD community file library by clicking HERE. By downloading this drawing and saving it toahandy location you can quickly produce PDF files without configuring each job individually.
When PDF Factory creates files without displaying the dialouge box, it saves them in it&#039;s Autosave location. This can be set by selecting the printer properties in AutoCAD, selecting the custom properties and click the folders button on the settings tab. Also check the number of autosave files and ensure the number is greater than the number of drawings are publishing.
The &#039;PDF A3_Single.PC3&#039; and &#039;PDF A3_Multi.PC3&#039; found in your D:\_A2008\_PLOTTERS folder are preconfigured to produce single and multisheet PDF files, providing you have set PUBLISHCOLLATE to 0.
ဒါကတော့ နောက်တမျိုး ခင်ဗျာ့
Training: Selection Preview Cycling.
တစ်ရက်မှာပေါ့ ချန်းချန်း က စတိန်းလက်စတီး မိုလ်ထုတ်ဖို့အတွက် ဘလောဂ်လေး တချို့ ဆွဲပေးရပါတယ်..
အဲ့ဒါကို မိုလ်လုပ်တဲ့ supplier ဆီအပ်တော့ တချို့ အစိတ်အပိုင်လေးတွေအတွက် သူတို့ casting မလုပ်နိုင်တာကြောင့် နဲနဲပြင်ချင်ပါတယ်တဲ့..
သူတို့ ပြင်တဲ့အခါမှာ ချန်းချန်းက auto CAD ရဲ့ 3D solid drawing ပေးတာဖြစ်ပေမယ့် သူတို့က mould sepacialize တွေမို့သူတို့သုံးနေကျ UG ( unigraphic ) ကိုသုံးပြီး edit လုပ်တာပါ... ပြင်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ ပြင်လို့ပြီးတဲ့ ဖိုင်နယ် ဒီဇိုင်းကို ချန်းချန်းအနေနဲ့ ပြန်စစ်ရမှာမို့ သူတို့ ဆီက drawing ပြန်တောင်းရပါတယ်.. သူတို့က ug ကနေ convert လုပ်ပြီး ပေးတဲ့ dwg file ကို ချန်းချန်းဖွင့်ကြည့်တော့ ချန်းချန်းပေးတုန်းကလို့ 3d solid မဟုတ်တော့ပဲ face တွေ spline တွေ mesh တွေအဖြစ်ပဲရပါတယ်.. dimension ကို ဘယ်နှဲ့ စစ်ရမယ်ဆိုတာ ချန်းချန်းဦးနှောက်ခြောက်တော့တာပါပဲ.. ဟိဟိ
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အဲ့ဒိပုံဆွဲတဲ့သူတို့ မေးကြည့်တော့ သူက dxf/dwg file အဖြစ် export လုပ်တဲ့နည်းကိုသုံးပါတယ်တဲ့.. အဲ့ဒိမှာ .sat file ကိုရော export လုပ်လို့ မရ၀ူးလားခင်ဗျာ ဆိုတော့ (Lucky!) ရတယ်တဲ့ ခင်ဗျ.. အဲ့ဒါနဲ့ .sat ဖိုင်ကိုပဲပို့ပေးဖို့ ပြောလိုက်မှ သူက .sat ဖိုင်လေးပို့ပေးပါတယ်..
အဲ့ဒိမှာ ပြောစရာရှိလာတာက ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ auto CAD user တွေဟာ .sat ဖိုင်ကို သုံးလေ့ မရှိကြ၀ူးထင်ပါတယ်.. သူ့ကို acad နဲ့ ဖွင့်ချင်ရင်
dxb (data exchange binary) ဖိုင်တွေ... wmf ( window meta file) ဖိုင်တွေလိုပဲ drawing တခုဖွင့်ထားပြီး acisin ဆိုတဲ့ command လေးကို acad ရဲ့ command line မှာရိုက်ပြီး .sat ဖိုင်ကိုရွေး open ဆိုရင် auto CAD ရဲ့ 3d solid properties တွေကို ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်......
Training: Legacy XREF Manager &amp; Ortho Mode
Legacy Xref Manager
Somethingafew of people have recently commented: &#039;I could do more with the old XREF Manager than the new one&#039;
The old XREF Manager is available by typing &#039;CLASSICXREF&#039; into the AutoCAD command prompt.
Shift to Turn Ortho On
Sure we all know how to turn Ortho on/off with the F8 key or by selecting one of the toggles on the status bar, but did you know there isaspeedy temporary means of doing it as well? Let&#039;s say you are moving an object inavertical direction and you realize your Ortho isn&#039;t on. Simply hold down the Shift key as you are moving the object, and Ortho will come on temporarily. When you release the Shift key, you&#039;ll find that Ortho returns to its previous setting.
drawing တခုဖွင့်ထားပြီး acisin ဆိုတဲ့ command လေးကို acad ရဲ့ command line မှာရိုက်ပြီး .sat ဖိုင်ကိုရွေး open ဆိုရင် auto CAD ရဲ့ 3d solid properties တွေကို ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်....
တကယ်လို့ auto CAD solid model ကို sat ဖိုင်ပြောင်းဖို့လိုလာရင်တော့ acisout ဆိုတဲ့ command ကိုသုံးရမှာပါ...
sat ဖိုင်ဆိုတာက လူလည်းဖတ်လို့ရ.. ကွန်ပြူတာလည်း နားလည်တဲ့ ascii ကုဒ်ဖိုင်လို့ပဲအလွယ်မှတ်ထားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..
..note pad နဲ့ ဖွင့်ကြည့်ရင် အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားသလို ကုဒ်တွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒါက ဖိုင်အပြည့်တော့ မဟုတ်ပါဝူး character 20000 ကျော်နေလို့ တချို့ တ၀က်ကို ပြန်ဖျက်ထားရပါတယ်...
700 2566 1 0
16 Autodesk AutoCAD 17 ASM 12.0.1.820 NT 24 Sat May 30 12:26:59 2009
body $1 -1 $-1 $2 $-1 $-1 #
ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $0 $3 $4 #
lump $5 -1 $-1 $-1 $6 $0 #
eye_refinement $-1 -1 @5 grid 1 @3 tri 1 @4 surf0@3 adj0@4 grad0@9 postcheck0@4 stol 0.017908725887537003 @4 ntol 30 @4 dsil0@8 flatness0@7 pixarea0@4 hmax0@6 gridar0@5 mgrid 3000 @5 ugrid0@5 vgrid0@10 end_fields #
vertex_template $-1 -130 1 8 #
ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $2 $3 $4 #
shell $7 -1 $-1 $-1 $-1 $8 $-1 $2 #
ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $-1 $-1 $6 $3 $4 #
face $9 -1 $-1 $10 $11 $6 $-1 $12 reversed single #
color-adesk-attrib $-1 -1 $13 $-1 $8 256 #
face $14 -1 $-1 $15 $16 $6 $-1 $17 reversed single #
loop $-1 -1 $-1 $18 $19 $8 #
cone-surface $-1 -1 $-1 13.801747367308394 35.733613474360354 -41.18136576833507 10001.7501 I I01 1.75 forward I I I I #
fmesh-eye-attrib $-1 -1 $20 $9 $8 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $21 $-1 $10 256 #
face $22 -1 $-1 $23 $24 $6 $-1 $25 reversed single #
loop $-1 -1 $-1 $26 $27 $10 #
cone-surface $-1 -1 $-1 13.801747367308394 19.933613474246485 -41.18136576833507 10001.7501 I I01 1.75 forward I I I I #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $28 $8 #
coedge $-1 -1 $-1 $19 $19 $29 $30 reversed $11 $-1 #
ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $31 $13 $8 $3 $4 #
fmesh-eye-attrib $-1 -1 $32 $14 $10 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $33 $-1 $15 256 #
face $34 -1 $-1 $35 $36 $6 $-1 $37 reversed single #
loop $-1 -1 $-1 $38 $39 $15 #
cone-surface $-1 -1 $-1 41.751747367290477 35.733613474360354 -69.131365768316925 -2.3684757858670005e-01501 1.7504.1448326252672506e-015 1 I I01 1.75 forward I I I I #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $40 $10 #
coedge $-1 -1 $-1 $27 $27 $41 $42 reversed $16 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $28 $28 $43 $44 reversed $18 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $29 $29 $19 $30 forward $45 $-1 #
edge $46 -1 $-1 $470$47 6.2831853071795862 $29 $48 forward @7 unknown #
persubent-acadSolidHistory-attrib $-1 -1 $-1 $20 $8 1 25 10#
ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $49 $21 $10 $3 $4 #
fmesh-eye-attrib $-1 -1 $50 $22 $15 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $51 $-1 $23 256 #
face $52 -1 $-1 $53 $54 $6 $-1 $55 forward single #
loop $-1 -1 $-1 $56 $57 $23 #
cone-surface $-1 -1 $-1 41.751747367290477 19.933613474246485 -69.131365768316698 -2.3684757858670005e-01501 1.7504.1448326252672506e-015 1 I I01 1.75 forward I I I I #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $58 $15 #
coedge $-1 -1 $-1 $39 $39 $59 $60 reversed $24 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $40 $40 $61 $62 reversed $26 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $41 $41 $27 $42 forward $63 $-1 #
edge $64 -1 $-1 $650$65 6.2831853071795862 $41 $66 forward @7 unknown #
coedge $-1 -1 $-1 $43 $43 $28 $44 forward $67 $-1 #
edge $68 -1 $-1 $690$69 6.2831853071795862 $43 $70 forward @7 unknown #
loop $-1 -1 $-1 $71 $29 $72 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $73 $-1 $30 256 #
vertex $-1 -1 $-1 $30 $74 #
ellipse-curve $-1 -1 $-1 19.801747367308394 35.733613474360354 -41.18136576833507 -10001.7501 I I #
persubent-acadSolidHistory-attrib $-1 -1 $-1 $32 $10 1 24 10#
ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $75 $33 $15 $3 $4 #
fmesh-eye-attrib $-1 -1 $76 $34 $23 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $77 $-1 $35 256 #
face $78 -1 $-1 $79 $80 $6 $-1 $55 forward single #
loop $-1 -1 $-1 $81 $82 $35 #
cone-surface $-1 -1 $-1 41.751747367290477 19.933613474246485 -69.131365768316698 -2.3684757858670005e-01501 -2.750-6.5133084111342514e-015 1 I I01 2.75 forward I I I I #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $83 $23 #
coedge $-1 -1 $-1 $57 $57 $84 $85 reversed $36 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $58 $58 $86 $87 reversed $38 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $59 $59 $39 $60 forward $88 $-1 #
edge $89 -1 $-1 $90 -5.2590727014734258e-031 $90 6.2831853071795862 $59 $91 forward @7 unknown #
coedge $-1 -1 $-1 $61 $61 $40 $62 forward $92 $-1 #
edge $93 -1 $-1 $940$94 6.2831853071795862 $61 $95 forward @7 unknown #
loop $-1 -1 $-1 $96 $41 $97 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $98 $-1 $42 256 #
vertex $-1 -1 $-1 $42 $99 #
ellipse-curve $-1 -1 $-1 19.801747367308622 19.933613474246485 -41.18136576833507 -10001.7501 I I #
loop $-1 -1 $-1 $100 $43 $101 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $102 $-1 $44 256 #
vertex $-1 -1 $-1 $44 $103 #
ellipse-curve $-1 -1 $-1 13.801747367308394 35.733613474360354 -41.18136576833507 10001.7501 I I #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $104 $72 #
face $105 -1 $-1 $106 $45 $6 $-1 $107 reversed single #
ptlist-eye-attrib $-1 -1 $-1 $46 $30 #
point $-1 -1 $-1 19.801747367308394 37.483613474360354 -41.18136576833507 #
persubent-acadSolidHistory-attrib $-1 -1 $-1 $50 $15 1 23 10#
ref_vt-eye-attrib $-1 -1 $108 $51 $23 $3 $4 #
fmesh-eye-attrib $-1 -1 $109 $52 $35 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $110 $-1 $53 256 #
face $111 -1 $-1 $112 $113 $6 $-1 $114 reversed single #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $115 $53 #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $116 $35 #
coedge $-1 -1 $-1 $117 $118 $119 $120 reversed $54 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $83 $83 $121 $122 reversed $56 $-1 #
coedge $-1 -1 $-1 $84 $84 $57 $85 forward $113 $-1 #
edge $123 -1 $-1 $124 -5.2590727014734258e-031 $124 6.2831853071795862 $84 $125 forward @7 unknown #
coedge $-1 -1 $-1 $86 $86 $58 $87 forward $126 $-1 #
edge $127 -1 $-1 $1280$128 6.2831853071795862 $86 $129 forward @7 unknown #
loop $-1 -1 $-1 $130 $59 $131 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $132 $-1 $60 256 #
vertex $-1 -1 $-1 $60 $133 #
ellipse-curve $-1 -1 $-1 41.751747367290477 35.733613474360354 -63.131365768316925 2.4424906541753444e-015 -2.2204460492503185e-016 -1 1.7504.1448326252672506e-015 1 I I #
loop $-1 -1 $-1 $134 $61 $135 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $136 $-1 $62 256 #
vertex $-1 -1 $-1 $62 $137 #
ellipse-curve $-1 -1 $-1 13.801747367308394 19.933613474246485 -41.18136576833507 10001.7501 I I #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $138 $97 #
face $139 -1 $-1 $135 $63 $6 $-1 $140 reversed single #
ptlist-eye-attrib $-1 -1 $-1 $64 $42 #
point $-1 -1 $-1 19.801747367308394 21.683613474246485 -41.18136576833507 #
loop $-1 -1 $-1 $-1 $141 $101 #
face $142 -1 $-1 $143 $67 $6 $-1 $144 forward single #
ptlist-eye-attrib $-1 -1 $-1 $68 $44 #
point $-1 -1 $-1 13.801747367308394 37.483613474360354 -41.18136576833507 #
coedge $-1 -1 $-1 $104 $104 $145 $146 reversed $71 $-1 #
color-adesk-attrib $-1 -1 $147 $-1 $72 256 #
face $148 -1 $-1 $149 $150 $6 $-1 $151 forward single #
နမူနာ sat ဖိုင်လေးကို attach လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. .txt ကို rename နဲ့ ဖျက်ပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်
သုံးရမယ့် command က acisin နော်....
အခုလို တင် ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အကို ပြော သလို နည်းတူပဲ &quot;ALIASEDIT&quot; ဆိုတဲ့ Command လေးနဲ့ လဲ အသုံးပြု ကြည့်ပါ acad.pgp File ဖွင့် စရာမလိုတော့ပါ။
Dialog box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် အဲဒီမှာ...
ရှိပြီးသား Command တွေကို လဲ ကို Edit လုပ်ချင်တဲ့ Command ကို Select လုပ်ပြီး Edit လုပ်လို့လဲရတယ် ဒါမှမဟုတ် အသစ်ရေး ချင်တယ်ဆိုလဲ Add ဆိုပြီး ပထမ လိုင်းမှာ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ shortcut အရင် ရေး နောက် shortcut လုပ်ချင် တဲ့ command ပေး အဲဒါပြီးရင် OK OK ဆိုပြီးထွက် လိုက်ရင် ရပါပြီ။
ကျွန်တော်လဲအဲ့ ပြသနာ အမြဲ ကြုံနေရ တယ်ဗျာ တကယ်လို့ ဖြေရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေး တွေ့ရင် မျှဝေပါဂျာ
သူများ lock လုပ်ထားတာကို ဖွင့်လို့မရတာလား..
ကိုယ့် Lock ဖိုင်ကို သူများက ဖွင့်လို့ရနေတာမျိုးလား..
တကယ်တော့ ပိတ်တဲ့သူက လည်း ဘယ်သူမှမပြင်စေချင်လို့ပိတ်ပါတယ်..
၂ ယောက်စလုံးတရားသဖြင့် အလုပ်လုပ်ကြတာမျိုးမို့.. ပြသနာတော့ မရှိတန်ရာပါဝူးခင်ဗျာ
နော် ပြောတာက *U blocks တွေပြောတာပါ
Architect က Drawing တွေအတော် များမှာ အဲဒါ မျိုး *U block တွေ ပါလာတယ် အဲ့ဒါ ကို မေးတာပါဂျာ။
အဲ့ဒါကလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. အောက်မှာပေးထားတဲ့ ကုဒ်လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါ...
(princ &quot;\_nCopyright (C) 1998, Fabricated Designs, Inc.&quot;)
(princ &quot;\_nLoading UnAnon v1.0 &quot;)
(setq uan_ nil lsp_file &quot;UnAnon&quot;)
(defun PDot ()(princ &quot;.&quot;))
(PDot);++++++++++++ Set Modes &amp; Error ++++++++++++++++++++++++++++++++++
(and (/=e&quot;quit / exit abort&quot;)
(princ (strcat &quot;\_nError: *** &quot;e&quot; *** &quot;)))
(command &quot;_.UNDO&quot; &quot;_END&quot; &quot;_.U&quot;)
(&quot;CMDECHO&quot; . 0) (&quot;MENUECHO&quot; . 0) (&quot;MENUCTL&quot; . 0) (&quot;MACROTRACE&quot; . 0)
(&quot;OSMODE&quot; . 0) (&quot;SORTENTS&quot; . 119)(&quot;MODEMACRO&quot; . &quot;.&quot;)
(&quot;BLIPMODE&quot; . 0) (&quot;EXPERT&quot; . 0) (&quot;SNAPMODE&quot; . 1) (&quot;PLINEWID&quot; . 0.0)
(&quot;ORTHOMODE&quot; . 1) (&quot;GRIDMODE&quot; . 0) (&quot;ELEVATION&quot; . 0) (&quot;THICKNESS&quot; . 0)
(&quot;FILEDIA&quot; . 0) (&quot;FILLMODE&quot; . 0) (&quot;SPLFRAME&quot; . 0) (&quot;UNITMODE&quot; . 0)
(&quot;TEXTEVAL&quot; . 0) (&quot;ATTDIA&quot; . 0) (&quot;AFLAGS&quot; . 0) (&quot;ATTREQ&quot; . 1)
(&quot;ATTMODE&quot; . 1) (&quot;UCSICON&quot; . 1) (&quot;HIGHLIGHT&quot; . 1) (&quot;REGENMODE&quot; . 1)
(&quot;COORDS&quot; . 2) (&quot;DRAGMODE&quot; . 2) (&quot;DIMZIN&quot; . 1) (&quot;PDMODE&quot; . 0)
(&quot;CECOLOR&quot; . &quot;BYLAYER&quot;) (&quot;CELTYPE&quot; . &quot;BYLAYER&quot;)))
(princ (strcat (getvar &quot;PLATFORM&quot;) &quot; Release &quot; (substr (ver) 18 2)
&quot; - Convert To Anonymous Blocks ....\_n&quot;))
(PDot);++++++++++++ Return Modes &amp; Error +++++++++++++++++++++++++++++++
(mapcar &#039;setvar m_n m_v)
(and (zerop (getvar &quot;UNDOCTL&quot;))
(command &quot;_.UNDO&quot; &quot;_ALL&quot;))
(and (= (logand (getvar &quot;UNDOCTL&quot;) 2) 2)
(command &quot;_.UNDO&quot; &quot;_CONTROL&quot; &quot;_ALL&quot;))
(and (= (logand (getvar &quot;UNDOCTL&quot;) 8) 8)
(command &quot;_.UNDO&quot; &quot;_END&quot;))
(command &quot;_.UNDO&quot; &quot;_GROUP&quot;))
(setq os (getvar &quot;SNAPMODE&quot;) s nil)
(while (&gt; (sslength st) 1)
(princ &quot;\_nOnly 1 At A Time Please\_n&quot;)
(setvar &quot;SNAPMODE&quot; os)
(setq bn &quot;TEMP1&quot; bc 1)
(while (tblsearch &quot;BLOCK&quot; bn)
(setq bc (1+ bc) bn (strcat &quot;TEMP&quot; (itoa bc))))
(and (= (type b) &#039;ENAME)
(setq bd (entget b)
(/= &quot;INSERT&quot; (cdr (assoc0bd)))
(/= &quot;*U&quot; (substr in 1 2))
(= (logand (cdr (assoc 70 (tblsearch &quot;BLOCK&quot; in))) 4) 4)
(= (logand (cdr (assoc 70 (tblsearch &quot;BLOCK&quot; in))) 16) 16)
(= (logand (cdr (assoc 70 (tblsearch &quot;BLOCK&quot; in))) 32) 32))
(princ &quot;*** Not An Anonomymous Block *** &quot;)
(setq tdef (tblsearch &quot;BLOCK&quot; in)
(entmake (list (cons0&quot;BLOCK&quot;)
(entmake (list (cons0&quot;ENDBLK&quot;)))
(princ (strcat &quot;\_n&quot; bn)))
(setq ss (ssget &quot;X&quot; (list (cons0&quot;INSERT&quot;)(cons 67 (if (= (getvar &quot;TILEMODE&quot;) 1)01)))))
(if (= &quot;*U&quot; (substr (cdr (assoc2(entget en))) 1 2))
(if uan_ (princ &quot;\_nUnAnon Loaded\_n&quot;))
lakegyi ပြောတဲ့..&quot;ALIASEDIT&quot; ဆိုတဲ့ Command လေးမှာထပ်ဖြည့်ပါရစေနော်...
autocad 2007/8/9/10 တွေမှာတော့ ဒီ command က autocad default command ဖြစ်သွားလို့
အဆင်ပြေလိမ့်မယ်..autocad 2006 နဲ့အရှေ့ပိုင်း version တွေဆိုရင်..Express tool plug-in
ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီးပါပြီး Block တစ်ခုချင်း အတွက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်
ဒါပေမဲ့ ကိုကိုက Multiple Selection ပေးဝူးဂျ (Only 1 At A Time Please) ပြောတယ်
နော့် Architect ကကိုကိုတွေက Furniture တွေ Doors တွေအကုန်လုံးကို *U---- တွေ သုံးထားတယ်။
အဲဒါကြောင့် *U---- တွေအကုန်လုံးတော့ မြန်မာ့နည်းပညာနဲ Explode လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။
တော်သေးတာပေါ့ explode လုပ်လို့ရနေသေးလို့...
တခါတလေ explode လုပ်လို့တောင်မရတာမျိုးကြုံဖူးတယ်..
အဲ့တော့လည်း မြန့်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်သုံးရတာပဲပေါ့ဗျာ...
ခုချန်းချန်းလည်း duplicate definition of block ignored ဆိုတာအတွက် အဖြေလိုက်ရှာနေတယ်..
နာမည်တူ nested block တွေရဲ့ block defination တွေက ပြသနာပေးတာလေ..
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ dimension တွေကို explode လုပ်မိရင် ကြုံရလေ့ရှိတယ်...
အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင် အဲ့ဒိထဲက လိုင်းတလိုင်း စာတလုံး စက်ဝိုင်းတ၀ိုင်းတောင် တခြား ဖိုင်ထဲကို ကော်ပီ လုပ်မရတော့ဝူး.. ဟန်းနေတတ်တာမျိုး..
တခါတလေ နာရီဝက်လောက်ကြာမှာ paste လုပ်လို့ရတာမျိုးကြုံရလေ့ရှိတယ်... ဖိုင်သေးရင်တောင် အနဲလေး ၅ မိနစ်လောက်တော့စောင့်နေရတတ်တယ်..
သူ့ထဲကဟာတင် ကော်ပီယူလို့မရတာလား ဆိုတော့ လည်း မဟုတ်ဝူး သူများဆီက လိုင်းလေးတလိုင်းတောင် သူ့ဆီ ကူးထဲ့လို့မရတာမျိုးရောပေါ့..
အင်မတန် တော်တဲ့ အာခီတွေပဲ .. အဲ့လို error မျိုးကို ဘယ်လိုများရအောင် ဖန်တီးကြလဲ မသိတော့ပါဝူး...
ဟဟ... ကြုံဖူးတဲ့သူများ လည်း ဆွေးနွေးပေးကြပါအုံးလို့... ဖိုရမ်းတွေကတော့ xref သုံးဖို့ဆွေးနွေးလေ့ရှိတယ် ဒါပေမယ့် စမ်းပြီးပြီ မထူးပါဝူး ..လေတယ်..
နဲနဲဖိုင်သေးရင်တော့ design center အကူအညီနဲ့ ကော်ပီကူးလို့ရတတ်ပေမယ့် စောင့်ရတာကတော့ သိပ်မကွါပါဝူး...
အကိုပြောတဲ့ Problem ကိုတော့ ရှင်း လို့ ရတယ် Problem ဖြစ်တဲ့ File ကို Scale reset လုပ်လိုက်ပါ
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] &lt;Add&gt;: r Reset scale list to defaults?
[Yes/No] &lt;No&gt;: y Scale list reset to default entries.
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] &lt;Add&gt;: e
အဲဒီအတိုင်း အားပေး လိုက် အကို ကျွန်တော့ Office က PC မှာတော့ LSP ရှိတယ် နောက်နေ့ နော် တင်ပေးမယ်
အဆင်ပြေသွားပြီ ကိုလိပ်ကြီးပြောတဲ့ ကွန်မန်းလေးနဲ့...
(DEFUN C:SCE () (COMMAND &quot;-SCALELISTEDIT&quot; &quot;R&quot; &quot;Y&quot; &quot;E&quot;) (princ))
အဲ့ဒါလေးကို macro လေးလုပ်ပြီးသုံးနေတယ်..
ဒါက မနေ့ကနော်ပြောတဲ့ LSP ပါ
နောကိုလဲ Office ကကိုကိုတွေ ပေးတာပါ။
Excel နှင့် Auto CAD file တွေလင့်လုပ်တာ အသေးစိတ်လုပ်ပုံလုပ်နည်းများ သိတဲ့လူများရှိရင် မျှပါဦး။ Excel မှာ Drawing Name တွေကို ကလစ်လိုက်ရင် အလိုလို သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ Auto CAD file ပွင့်သွားအောင်ပေါ့။ Hyperlink သုံးထားတာတော့သိတယ်။
Spread sheet နဲ့တော့ချိတ်ကြတာပါပဲ...ကျွန်တော်ပြောတာထက်
ပိုကောင်းမယ့် tutorial လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..dwg,pdf,excel files တွေပါပါတယ်။
ဒါလေးကို download လုပ်ပြီး..သူ့အတိုင်းရအောင်လုပ်ကြည့်ပြီးရင်
ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်မယ်လို့ ကတိပေးထားပြီး ပျက်ကွက်ခဲ့တာကိုခွင့်လွတ်ပါ
Training: I want to see the frame but I dont want to print it
In order to select and edit an attached image, DWF, OLE object, or DGN file, you need to turn on the associated frame. But often when we print, we want those frames to be turned off. Flipping the various system variables on and off (1 and 0) can be tedious and irritating. AutoCAD 2008 introducedafantastic new option that keeps the frame on the screen for editing but doesn&#039;t print the frame.
Simply set the appropriate system variable, (IMAGEFRAME, DWFRAME, OLEFRAME, or DGNFRAME) toavalue of 2, and you will be in great shape.
Training: From text to Mtext
To convert from text to Mtext, use the Express Tools command TXT2MTXT. Choose Express&gt; Text&gt; Convert Text to Mtext.
One nice feature of the command is that if you select text objects first, the command executes without further input -- very efficient! Another efficient feature is that the command doesatrue conversion; your old text objects are gone.
Start the DTEXT or TEXT command. Specify the start point, height and rotation angle as usual. You&#039;ll then seeasmall box and cursor. Paste from the clipboard and press Enter to end the command. You&#039;ll then need to delete your Mtext object.
You can simply explode the Mtext; the difference is that you&#039;ll keep the line wrapping. It all depends on which result you want. A bonus is that you don&#039;t have to delete the original object.
Have you ever noticed AutoCAD is doing some crazy stuff? Specifically, when you go to select additional objects, the original objects are removed from the selection set.
PICKADD controls the selection set. If it’s set to “0″ (which is the case outlined above), picking additional objects will remove the previous selection set. You can add additional objects to your selection set, but you must hold the SHIFT key down while selecting.
If PICKADD is set to “1″, each additional object or set of objects selected is added to the current selection set. There are two ways to remove selected objects.
1.	Type “R” while asked to Select Objects and you will go into “remove” mode.
2.	Hold the SHIFT key down and select the objects you wish to remove.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ user တွေ ဆိုမြန်မာလိုတောင်
တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့ အရေးအသားမကောင်းတော့ သဘောမပေါက်လို့
ပြန်မေးကြတယ်...နို့မို့ဆို သူတို့အဖို့ နိုင်ငံခြား forum ထဲသွားဖတ်နေရသလို
ကို papagyi ခင်ဗျာ
အမှန်အတိုင်းပြောရင် နော် English ကမြန်မာလိုပြန်ဖို့အတွက် အချိန်ယူရတာရယ် နောက်ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လို့ရှိရင် လွဲမှားသွားမှာစိုးတာကြောင့်ပါ
ကျွန်တော် ကြိုးစားပါ့ မယ် အကို
အချိန်ရရင် တော့ဘာသာပြန်ပြီးရေးပေးပါနော်.ကျွန်တော်တို့လဲလိုက်လုပ်ကြည့်ပြီး လိုခဲ့ရင်ပြန်ဆွေးနွေးပါ့မယ်နော်..
forum ဆိုတာဒီလိုပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖလှယ်ကြ ဆွေးနွေးကြနဲ့ ပညာတိုးတက်စေဖို့ပါ..ကို လိပ်ရေ..
ကျွန်တော် ကိုထွန်းအောင်ကျော် ဆီက သတင်းကောင်ရထားတယ် အကိုဒီကိုလာရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတည်းမယ်လို့
အဲဒီတော့ မှ အတူတူရေးကြရင် မကောင်းလား
:7:AutoCAD ခေါင်းစဉ်အောက်က အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်ထားတာ အရမ်းဗဟုသုတရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သိသလောက် ဖြန့်ဝေပေးပါရစေ.................... တကယ်တော့ကျွန်တော့်အမြင်အရတော့ AutoCAD က ပုံထုတ်မယ်ဆိုရင် တခြား drawing software တွေထက် အနည်းငယ်အားနည်းမယ်ထင်တယ်...................... အထူးသဖြင့် 3D ပုံတွေမှာဆို ပိုသိသာပါတယ်................ ကျွန်တော်ကတော့ ပုံထုတ်မယ်ဆို အဓိကတော့ Autodesk Inventor software ကိုသုံးတယ်................. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဆွဲတတ်တာကတော့ AutoCAD ပါ............. အဲဒါကြောင့် ပုံဆွဲရင် AutoCAD နဲ့ဆွဲပြီး ပုံထုတ်ရင်တော့ Autodesk Inventor ထဲမှာထုတ်ပါတယ်..................... အဲဒီတော့ AutoCAD (.dwg or .dxf) ကို file type ပြောင်းရပါတယ်...................... ကံကောင်းတာက Autodesk Inventor ထဲမှာ (.dwg) ကို ဖွင့်လို့ ရတယ်.................... တခုသတိထားရမှာက Autodesk Inventor9ဆိုရင် AutoCAD 2004 နှင့် ပိုနိမ့်သော format နဲ့ မှဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ ............................. ကျွန်တော့်လိုအနည်းငယ်သာသိသူတွေအနေနဲ့ AutoCAD မှာရပ်တန့်မနေပဲ တခြားသော software တွေပါလေ့လာကြပါလို့ အကြံပေးပါရစေ....................... လိုအပ်ချက်များရှိပါကလည်းအကြံပြုပေးကြပါရန်................................. သူငယ်ချင်းအားလုံး အသစ်သစ်သော ပညာရပ်များကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ................................ :ok
ကောင်းတယ် ကို သန့်ဇော်ရေ ..ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီလို post လေးတွေများများရေးပါ..
အဲတစ်ခုတော့ အဆင်ပြေရင်တော့ ဒီလို post လေးတွေကို &quot;Auto CAD Tips &amp; Tricks&quot;
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာ ရေးပေးပါလားနော်..တူရာလေးတွေ စုထားတော့ ဖတ်တဲ့သူတွေလဲ တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်..
AutoCAD Program ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းလေးများ-အပိုင်း (၁)
AutoCAD Professional Tips and Techniques ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကနေ ရတာကိုမြန်မာလိုပြန်ပြီး Share လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နဲနဲခြင်းစီ အားရင်အားသလို ရေးသားပေးမှာပါ။ နောက်ပြီးရင်တော့ စာအုပ်မူရင်းတင်ပေးပါ့မယ်။
အနည်းနဲ့ အများအသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားတဲ့သူကတော့ L y n n A l len နဲ့ S co t t On s t o t t တို့ဖြစ်ပါတယ်။
1. Defragment and Check the File System
ဒါလေးကတော့ ထွေထွေထူးထူးရှင်းပြဖို့မလိုလောက်ပါဘူး။ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ။
2. Take Control of the Swap File
တခါတရံမှာ Drawing file size ကြီးမားလှတဲ့ Xrefs or 3D geometry file တွေတစ်ခုထက်ပိုဖွင့်ပြီး reference အနေနဲ့ယူကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ရတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တခြား Program တွေ Run ထားပြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ရတာနှေးနေတာနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ RAM မလုံလောက်ပဲနဲ့ နှေးသွားတာကို RAM memory ကို အားဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။
A. Start menu ➔ Settings ➔ Control Panel ➔ System. Click the Advanced tab
B. Click the Settings button in the Performance area မှာရှိတဲ့ Setting ကို ကလစ်ပါ။
C. Performance Options dialog box မှာ Advanced tab ကို ကလစ် လုပ်ပါ။ Virtual Memory area မှာ Change ဆိုတာလေးကို ကလစ် လုပ်ပါ။
D. Custom Size radio button ကို ရွေးပါ, Initial Size နေရာမှာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ RAM ရဲ့ နှစ်ဆလောက်ထားပါ။
ဥပမာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက 1 GB of RAM ရှိတယ်ဆိုရင် Initial Size ကို 2048 လောက်ထားပေါ့။
E. Maximum Size ကိုတော့ ၃ ဆလောက်ထားပေါ့။ပြီးရင် Set ကို Click ပြီးရင်OK တွေပေးလိုက်ပေါ့။
F. ပြီးရင် restart လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ AutoCAD ဖွင့်ပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ Performance ကောင်းကောင်းလေးရမှာပါ။
ကျွန်တော် ရုံးကရခဲ့တဲ့ Training:7Top Tips! ပါ။
တချို့ No.2,3,4 ကိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဘာမှန်းမသိပါ
သိတဲ့ ကိုကိုမမ တို့ ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ကျွန်တော်သိတာတွေ ကို English အောက်မှာ မြန်မာလိုနဲ့ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
1. The quickest way to createaraster image of your drawing?
JPGOUT, TIFOUT and BMPOUT are instant ways to create an image file of your drawing!
2. Holding shift temporarily toggles Ortho?
3. PLINEGEN alters how linetype patterns are generated around vertices ona2D polyline?
4. Setting QTEXTMODE to 1 greatly speeds up drawings with lots of text objects?
5. Control+page-up and Control+page-down switches you rapidly between modelspace and layout tabs?
6. DIMBREAK can be used to tidy overlapping dim lines instantly?
7. TASKBAR - setting it to 1 displays all your AutoCAD sessions on the taskbar, not just the one!
လိုအပ်တာတွေရှိရင် သင်ကြားဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးပေးကြပါ။
၁။ကျွန်တော်တို့ Autocad မှ Model မှာဖြစ်စေ Layout မှာဖြစ်စေ လိုချင်သော Zoom နေအထားအတိုင်ထားပြီး JPG, TIF &amp; BMP image တွေနေနဲ့ Save ချင်တယ် ဆိုရင် JPGOUT, TIFOUT and BMPOUT စတဲ့ Command တွေနဲ့ အားပေးလိုက်ပါ။
ဒါပေမဲ့ Scale နဲ့ Background က အမဲရောင်နဲ့ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
၅။Model Space ကနေ Layout tabs တွေ အလွယ်တကူ သွားလို့ရတဲ့ နည်းလေးကတော့
Control key+Page Up key နဲ့ Control key+Page Down key တွေ ပါ
အောက်မှာ ခရမ်းရောင်ချယ် ပြထားပေးပါတယ်။
၆။ကိုကိုမမတွေ Dimension line တွေဆွဲရာ မှာ တခုနဲ့ တခု ထပ်နေခဲ့လို့ Brake ဖြတ်ချင်ရင်
DIMBREAK ဆိုတဲ့ Command လေးနဲ့ အားပေးလိုက်ပါ။
Select object to break dimension or [Auto/Restore/Manual] &lt;Auto&gt;: m
ကိုယ် Brake ဖြတ်ချင်တဲ့ Dimension line ကို Select လုပ်ပြီး အားပေးလိုက်ပါ အောက်ကအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
၇။ကိုယ်ဖွင့်ထားတဲ့ Drawing File တွေ Window Task Bar မှာ ပေါ်ချင်ရင် တော့
Task Bar Setting ကို ၁ မှာ ထားလိုက်ပါ
Enter new value for Taskbar &lt;0&gt;: 1
2. အဲ့ဒါက ချန်းချန်းတို့ ပုံဆွဲနေတုန်း ortho on ချင်ရင် F8 function key ကို နှိပ် ပြီး နောက်တချက် ပြန်မနှိပ်မချင်း ortho on ထားတဲ့ အတိုင်း ဆွဲ သွားနိုင်ပါတယ်..တကယ်လို့ ortho ကို on ပြီးမဆွဲချင်ဝူး
တခါတလေမှာ ပဲ သုံးချင်တာဆိုရင် shift key လေးကို နှိပ်ပြီး ယာယီ ortho လုပ်ထားနိုင်တာမျိုးပါ....ဒါပေမယ့် ၂၀၀၆ အထိ ဒီ option မပါလာသေးဝူးထင်ပါတယ်.. ခုချန်းချန်း capture လုပ်ထားတာက
၃. plinegen ဒါကတော့ အင်မတန်အသုံးဝင်တဲ့ variable လေးဖြစ်ပေမယ့် ချန်းချန်းစက်မှာတော့ ဘယ်နှဲ့ဖြစ်တယ်မသိ..0ထားထား ... 1 ထားထား... တူတူပဲ ဖြစ်နေလေရဲ့... ဟိဟိ
အောက်က ပုံလေးမှာကြည့်ပါခင်ဗျာ... အထူးသဖြင့် ထောင့်လေးတွေကို သတိထားကြည့်စေချင်ပါတယ်.....
၄. qtext ကတော့ အင်မတန်အသုံးဝင်လှပါတယ်.. မိမိdrawing ဖိုင်ထဲမှာ single line text တွေ multiline text တွေ dimension တွေ အလွန်တရာများပြားလာတဲ့ အခါမှာ zooming , panning လုပ်ရတာ အချိန်ကြာလာတတ်ပါတယ်..
မိမိရဲ့ pc system က နိမ့်လေ ပိုသိသာလေပါပဲ... အဲ့ဒိခါမျိုးမှာ qtext mode ကို On ထားခြင်းအားဖြင့် မိမိရဲ့ drafting မြန်နှုန်းကို မြှင့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်... .shs နဲ့ shape font မျိုးက တအား မလေးတတ်ပေမယ့် true type font တွေကတော့ အင်မတန်သိသာလှပါတယ်... တခု စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတတ်တာက မိမိက မြန်နှုန်းကို အဓိက ဦးစားပေးနေတုန်းအချိန်မှာတော့ text တွေကို လေးထောင့်ကွာက်လေးတွေနဲ့ ပဲ မြင့်ရတာပါ...
အဲ့ဒါကို သီးခံနိုင်တယ်ဆိုရင် အင်မတန်း အသုံးဝင်လှပါကြောင်း....
AutoCad မှာ command ကို log ချရင်လွယ်ပါတယ်။command မှာ undefine လို့ ရိုက်ပါ။အဲ့ဒီ့အခါမှာ ဘယ်command ကို ခေတ္တ ပယ်ထားမလဲဆိုတာ computer က မေးပါမယ်။ line ဆိုရင် line လို့ ရိုက်ရပါမယ်။ L enter လုပ်လို့ မရဘူးနော်၊circle ဆိုရင်လည်း circle လို့ ရိုက်ရပါမယ်။ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်လုပ်ထား
တဲ့ command (ဥပမာ-line ဆိုရင် L enter. circle ဆိုရင် C enter ခေါက်ကြည့်ပါ။မရတော့ပါဘူး။ဒါကို ပြန်ဖော်ချင်ရင်တော့၊ command မှာ redefine လို့ ရိုက်ပါ။
ဘယ် command ကို redefine လို့ မေးရင် ကိုယ်မရတဲ့ ၊ကိုယ် undefine လုပ်ထားတဲ့ command ကိုပြန်ရိုက်ရပါမယ်။circle ဆိုရင် circle . line ဆိုရင် line ....etc...
အဲ့ဒီ့လို ရိုက်ပေးပြီး enter ခေါက်ပါ။ဒါဆိုရင် ပြန်သုံးလို့ရပါပြီ၊တခါတလေ တချို့ autocad software တွေ install မပြည့်စုံမှုကြောင့် command ပေးလို့မရတာတွေရှိပါ
တယ်။အဲ့ဒီ့အခါမျိုးမှာ ဥပမာ copy ဆိုရင် co enter /cp enter နေရာမှာ *co enter/ *cp enter လုပ်ကြည့်ပါ။ခရေပွင့် * က အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ 8 ကို shift နဲ့ တွဲ
နှိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင်တန်းမှာ ဖြစ်ဖြစ် တယောက်ယောက်က undefine လုပ်ပြီး နောက်သွားရင် redefine ပြန်လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
လေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မသိသေးသူတွေ သိအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
်format ပြောင်းတဲ့ Command တော့ရှိပါတယ် jpgout ရယ် bmpout ။ အဲ့ဒီ Command နှစ်ခုနဲ. .jpg .bmp ဖြစ်အောင်ပြောင်းလို.ရပါတယ် ။
jpg ကတခါတလေဆိုမမြင်ရဘူး :&#039;(
တကယ်လို့ Auto CAD မှာ line type တွေထပ်ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် နဂို ရှိပြီးသား line type တွေကို နမူနာ ယူဖတ်ရှု့လေ့လားထားသင့်ပါတယ်... အဲ့ဒိအတွက် acad.lin နဲ့ acadiso.lin ကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရှိနေဖို့လိုတာပါ..note pad လေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်...
;; Copyright (C) 1991-2007 by Autodesk, Inc. All Rights Reserved.
scroll ကို အောက်ဆုံးထိဆွဲကြည့်လိုက်ရင်
line type တခုစီအတွက် စာ၂ကြောင်းစီပါဝင်တာကို သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်...
ပထမစာကြောင်းက *လိုင်းtype အမည် နဲ့ , ရှင်းလင်းချက် သဘော မျိုးလေးပါ..
ဆိုလိုတာက ပထမစာကြောင်းကို အမြဲတန်း asterisk&quot;*&quot; နဲ့စပါတယ်..ပြီးရင် linetype ရဲ့ Name ပါName မှာspace မပါရပါဝူး..description ကမပေးလဲရပါတယ် ပေးမယ်ဆိုရင် ကော်မာ ခံပြီး ရေးသွားနိုင်ပါတယ် စာလုံးရေ ၄၇ လုံးထိပဲလက်ခံပါတယ်.. ဒီလောက်ဆို ပထမစာကြောင်းအတွက် သိလောက်ပြီထင်ပါရဲ့..
ဒုတိယစာကြောင်းက တော့ linetype ရဲ့ defination ပါ.. A နဲ့အမြဲတန်းစပါတယ်..item တခုချင်းစီကို ကော်မာကုတ်ပြီးရေးသွားယုံပါပဲ.. ဒုတိယလိုင်းအတွက် စာလုံးရေ ၈၀ ထိလက်ခံပါတယ်.
ဂဏာန်းတွေအတွက် အဓိပ္မါယ် ဖွင့် ပုံကတော့ အပေါင်းကိန်းဟာ dash ကိုကုယ်စားပြုပြီး တန်ဖို့းကတော့ အလျားပေါ့ခင်ဗျာ.. အနုတ်ကိန်းကတော့ space ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် တကယ်လို့ dot အတွက်ဆိုရင်တော့ zero &quot;0&quot; ပါ..ပံမှန်ဆိုရင်တော့ acad.lin ရဲ့အောက်ဆုံးကနေ မိမိအသစ်ထည့်လိုတဲ့ line type ကို ထည့်ဖြည့်ရေးသွင်းပြီး တခါတည်းသုံးနိုင်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ် note pad မှာရေးပြီး နှစ်သက်ရာ name.lin နဲ့save လုပ်သိမ်းပြီးလဲသုံးနိုင်ပါတယ်...မိမိဖန်တီးချင်တဲ့ line design က ရှုပ်ထွေးလေ ရေးရတာ နဲနဲ လက်ဝင်လေပါပဲ..
အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်မယ့် နောက်တနည်းကတော့ express menu က mkltype ကိုသုံးတာပါ..
mkltype ကတော့ အင်မတန်အသုံးဝင်လှပါတယ်.. တကယ်လို့ ခပ်ရှုပ်ရှုပ်တွေအတွက်ဆိုရင် mkshape နဲ့လည်းတွဲဖတ်သုံးနိုင်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် တချက်လေးတော့ သတိထားခင်ဗျာ့
ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ ဟာလေးတွေ သေချာမှတ်ထားပြီးပြောင်းစေချင် ကျနော် အဲဒီ Command အသုံးကောင်းလို့ ရုံးခန်ထဲခေါ်ပြီးအကော ခံရဖူးပါတယ်
ကျွန်တော် အင်ဒိုနီးရှား ကိုပုံတွေပို့လိုက်တာ
Revision No. တွေ မှားပြီးပြန်လာလို့ အမှန် Revision No. က 1 ဗျာ
အဲဒါကို ကိုကိုတွေက 0A ဆိုပြီးအားပေးထဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ Find Command ကို အားကိုးပြီး 0A ကနေ 1 ကိုအားပေးတာပေါ့ဗျာ အားလုံး အဆင်ပြေပါသွားပါ တယ် ဒါပေမယ့် Electrical Single Line Diagram မှာ လွှဲတာပဲ ခင်ဗျ
20A,50A,100A တွေအကုန်လုံး 0A တွေမှာ 1 တွေ ပြောင်းကုန်ပြီး 21,51,101 တွေဖြစ်ကုန်လို့ QP ကခေါ်ပြီး အကောခံရတယ်ခင်ဗျ။
:4:ဟားဟား မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် လိပ်ရေ...
ဟုတ်တယ် သူက drawing ထဲမှာ ရှိသမျှတွေ အကုန်ပြောင်း ကိုတာ သတိထားရတယ်..
အစ်ကိုလဲ အရင်တုန်းက ခဏခဏ ဖြစ်ဘူးတယ်.. :2:
မှတ်သားစရာပဲ ကိုလိပ်ကြီးရေ ....
ကျမက structure ဆွဲရတာဆိုတော့ material thinkness တွေချိန်းရင် ကျန်ကျန်ခဲ့တတ်လို့
ဒီ command လေးနဲ့ အဆင်ပြေနေတာ
ကျနော်ကတော့ တတ်နိုင်သမျှ Thickness ချိန်းချင်ရုံလောက်ဆိုရင်တောင် အတွဲလိုက် ရိုက်ထည့်ပေးတယ်.. ဒီအတွက် အစကတည်းက ပြင်ရမယ်ဟာလောက်မှန်းဖြစ်နေတဲ့ အညွန်းတွေ ရိုက်ထည့်တဲ့အခါ
အမြီးနဲ့ ခေါင်း တူအောင်စကတည်းက လုပ်ထားလိုက်တယ်... ဥပမာ 150x75x6.5 thk G.M.S C CHANNEL ကို thk 6.5 ကနေ9ပြောင်းချင်ရင် 150x75x6.5 thk G.M.S C CHANNEL တစ်ခုလုံး find လုပ်ပြီး 150x75x9.0 thk G.M.S C CHANNEL ဆိုပြီး လုပ်ပေးလိုက်တယ်လေ..
အဲ.. သတိတော့ ထားရတာပေါ့နော့
Hi Hi! :7:
Post တွေဖတ်ပြီး ဘယ်နေရာက၀င်ရေးရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး…သူ့ထက်ငါလူစွမ်းကောင်းကြီးပဲ…
Ko Chan Chan,Ko Par Gyi,ကိုလိပ်ကြီး,Ma KPZ…….၀င်ရောက်ဆွေးနွေးသူအားလုံးကိုလေးစားအားကျပြီး ကိုယ်သိသလောက်လေးဝင်ရေးချင်ပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဝင်မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး… (အဓိကကတော့ စာရေးပျင်းတာ…အချိန်ရှိတော့ရေးရမှာပျင်း ရေးချင်တော့ အချိန်မရ…ခုတော့ Ko Chit Tee ရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ရေးဖြစ်တော့မယ် ETABS သင်တန်းလေးတက်ချင်လွန်းလို့ပါ..အဟီး..)
HH တို့ဆီမှာ အယင်က Auto CAD 2006 သုံးရာကနေ 2010 ဖြစ်သွားတယ် Auto CAD 2009 ကိုမသုံးဖြစ်လိုက်တော့ Auto CAD 2010 Tools Bar တွေက ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီးပဲ လိုက်ရှာနေရတယ်
**Auto CAD 2010 မှာ Tools Bar တွေကို 2004 တို့ 2006 တို့မှာလိုပဲသုံးချင်ယင် ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာရှိတဲ့
Workspace Switching က Arrow လေးကို click ပြီး AutoCad Classic ကိုရွေးလိုက်ပါ…
ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား Tools Bar လေးတွေနဲ့ Auto CAD 2010 ကို သုံးလို့ရပါပြီ….
**Auto CAD 2004 နဲ့ 2004အထက် Version တွေမှာ 3D Orbit အတွက် Shift+Ctrl ကို ဖိထားပြီး Mouse Wheel လေးကိုဖိကစား ပေးလို့လဲရပါတယ်
မသိသေးသူများအတွက်ပါ…..(တဆက်တည်းမေးပါရစေ…တချို့Font တွေကို လေးထောင်တုံးလေးတွေပဲမြင်ရတယ်…လုပ်ကြပါဦး. :?.ဘယ်Font ကိုဘယ်ကနေ Install လုပ်ရပါ့)
ဒါကရေးချင်လွန်းလို့ Microsoft Word ထဲမှာရေးပြီးကူးထည့်ထားတာ…) :P
ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ အဲဒီ လေးထောင့် က နှစ်ခုရှိတယ်...options က display tab မှာ
&quot; show text boundary frame only &quot; ကို tick လုပ်ထားရင် လေးထောင့်တွေပေါ်နေပြီး..
တစ်ကယ်လို့ font မရှိ တာဆိုရင် ??? တွေပေါ်တယ်ဗျ..အဲဒါဆိုလဲ..autocad ကို အရင်ပိတ်..နောက်..
အဲဒီ မရှိတဲ့ font ကို copy ကူးပြီး
autocad install လုပ်ထားတဲ့ folder ထဲ က font folder ထဲ paste လုပ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ရင် အဆင်ပြေတာပါပဲ... :)
Ko Pargyi ရေ…ခုလိုအားပေးတာရော ဖြေကြားပေးတာကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Myanmar font မှာ လေးထောင့်တုံးလေးတွေဖြစ်နေတာက MEF မှာပါ….တခြားစာတွေအကုန်ဖတ်လို့ရတယ်..
ဥပမာ ကျော်သွားမည်ဆိုပြီး arrow လေးနှိပ်လိုက်ရင် အဲဒီထဲမှာ လေးထောင့်တုံးလေးတွေ ညာဘက်က Rectangle လေးရောပဲ..
ပြီးတော့ post ရေးမယ်ဆိုလဲ post box လေးထဲနဲ့ လက်ကွက်မှာ လေးထောင့်တုံးလေးတွေဖြစ်နေတာ…
အခုမှကလိဆဲ ကာလမို့ ပုံတင်တာအဆင်မပြေသေးလို့ပုံနဲ့မပြနိုင်ဖြစ်နေတယ်…
အဲဒါက ...http://www.myanmarengineer.org/ အဲဒီ အိမ်တော်နေရာမှာ ...စာမျက်နှာရဲ့ ဗယ်ဘက်အောက်ပိုင်းလောက်မှာ ..
Myanmar Font Download ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က Download Zawgyi-One Font,Download Zawgyi Keyboard လေးတွေ
download ချ install လုပ်ပြီးပြီလားမသိဘူး...နောက် ပုံတင်တာတွေရော..တစ်ခြား forum နဲ့ပတ်သတ်တာလေးတွေ လုပ်ချင်တာ
သိချင်တာလေးတွေ အတွက် ..http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/board,3.0.html အဲဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်.. :)
HH က ACAD ကို သင်တန်းကျကျနနမတက်ခဲ့ရပါဘူး
အလုပ်လုပ်ရင်း Self Study လုပ်ရတာပါ…
အဲဒီတုန်းက အခက်အခဲလေးတွေထဲမှာ ဒီတစ်ခုလဲပါတာပေါ့…
Object တစ်ခုကို Select လုပ်ပြီး နောက်ထပ် Object တွေSelect ထပ်လုပ်တော့ အရှေ့ကပျေက်သွားရော…ဒီလိုနဲ့မေးရင်းမြန်းရင်းကနေ သိသွားတာ..
**Properties(Ctl+1) ကနေ Toogle Value မှာ “1” ဖြစ်နေတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ “+” လေးဖြစ်သွားေ၇ာ…အဲဒီတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တာ…
Select လုပ်ပြီးသား Object တွေထဲကနေ Object လေးတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖြုတ်ချင်တာ…အယင်မသိခင်ကတော့ Escape နှိပ် ခက်ခက်ခဲခဲ Select ပြန်လုပ်တာပေါ့..နောက်မှ စာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့
**Shift+ နဲ့တွဲပြီး Select လုပ်ရင် deselect ဖြစ်ကြောင်းသိရတော့တယ်…
ပြီးတော့ Quick Select…တစ်ခါတစ်လေ သုံးဖို့မေ့နေတတ်တယ်..သမရိုးကျအတိုင်းobject တွေကို Select မလုပ်ပဲ အမြန် Select လုပ်လို့ရတဲ့နည်းပါ…ဥပမာ သူများဆွဲထားတဲ့ ပုံတစ်ခုကိုပြင်ရတော့မယ်ဆိုပါစို့ သူက text တွေနဲ့ object တွေကို layer အတူဆွဲထားတာ ပြန်ခွဲချင်တယ်ဆိုပါစို့…
**Properties(Ctrl+1) ပြီးရင် ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က Quick Select ကို Click …ကျလာတဲ့Box မှာ ကိုယ် Select လုပ်ချင်တာက
* Entire Drawing လား?? မဟုတ်ရင်တော့ သူ့ဘေးက Select Object ဆိုတဲ့ Buttom လေးကို Click&gt; select window လုပ်….
*Object Type မှာ text ကို select လုပ်မှာဆိုတော့ Text ကိုရွေး(ဥပမာပါ)
* Properties မှာ Layer (ကိုယ်ရွေးမဲ့ Text က Layer 1 ထဲက ဆိုပါစို့ ..colour,….စသည်ဖြင့်လဲရွေးလို့ရပါတယ်)…
ဒါဆိုကိုယ်လိုချင်တာပဲ ရွေးပြီးSelect လုပ်သွားပါပြီ…..
Layer ပြောင်းချင်တာဆို ပြောင်း စသည်ဖြင့် လုပ်လို့ရပါပြီ….
Let me share some auto LISP file for auto printing.
Please download this attached file and save in your computer.
AUTO_dxff_plot is for autoCAD file to printer (hard copy) printing
AUTO_pdf_plot is for autoCAD file to PDF printing.
Print ထုတ်ရန် file တွေအဓျ၁းကြီးရှိတဲ့အခါ
File တစ်ခုကိုအရင် ဖွင့်ပြီး print ရပါဓယ်...printer, paper size, plot area,......
**plot area မှာ extend ကို ရွေးရမှာပါ...ဒါကြောင့် file တစ်ခုကို drawing တစ်ပုံပဲရှိနေရပါမယ်...***
ပထမဆုံး file ကို အဲဒီအတိုင်း print ပြီးရင်...
command line မှာ ap(or appload) ရိုက်ထည့်...ကျလာတဲ့ box မှာ ညာဘက်အောက်ထောင့်က Contents လေးကိုနှိပ် (or o enter) ပြီးရင် Add&gt; ခုန save တဲ့ AUTO_dxff_plot file ကိုသွားရွေး.. Add&gt;close&gt;close[/b]&gt;close[/b]
ဒါဆိုရပြီ...ထုတ်ချင်တဲ့ file တွေကို တန်းစီဖွင့်ပေတော့...ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ auto printသွားပြီ....
ပြီးရင် remove လုပ်ဖို့တော့မမေ့နဲ့နော်...file ဖွင့်တာနဲ့ သူကအလိုလို print တော့တာ :haha:
HH စက်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ remove လုပ်ဖို့အတွက် AUTO_dxff_plot file ကိုအရင် delete လုပ်ပြီးမှ remove လုပ်လို့ရတယ်..
remove လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ ap&gt;contents&gt;select file&gt;remove&gt;close လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ...
AUTO_pdf_plot ကိုတော့ File Name ကို Autoပေးလို့ရအောင် ကြိုးစားကြည့်နေတုန်းမို့ သိတဲ့သူများ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး....
Auto CAD မှာပါတဲ့ Layer အကြောင်း နဲ့Drawing Limits တွေအကြောင်း အသေးစိတ် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုသုံးရတယ် ၊ ဘာကြောင့်သုံးရတယ် ၊ ဘယ်လို အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာပေါ့။
ကျွန်တော် သိသလောက် လေးဆွေးနွေးပေး ပါရစေ
Layers တွေခွဲရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တကယ်လို့ အကိုပုံမှာ Services ဒါမှမဟုတ် အကို ပြချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ အများကြီး ဆိုရင် Layer တွေတခုချင်း ခွဲထားခဲ့မယ်ဆိုရင် နောင်အကို ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် Layers ကို ရွေးပြီးပြင်ရင် အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုလိပ်ရေ Layer မှာ ပါတဲ့ freeze နဲ့new vp freeze အကြောင်းလေး ပြောပြပါအုံး
drawing limits ရဲ့အကြောင်းလေးလဲ လုပ်ပါအုံး။
freeze ဆိုတာကတော့ အကို ပုံ တခုလုံးမှာ အဲဒီ Layer ကို Freeze လုပ်လိုက်ရင် ဘယ် Layout/Model မှာမ မပေါ်တော့ပါ
new VP Freeze ကတော့ Layout တခုချင်းဆီမှာ Freeze လုပ်လို့ရပါတယ်
ဒီလို model ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ပုံကို Layout မှာ
Drawing Limits ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အကိုဆွဲ လိုတဲ့ စာရွက်ဆိုက်မှာ ၀င်အောင်ပေးတာပါ
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ မသုံးပါဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်ခတ်ထားတယ်လို့ ခံစားရလို့ပါ
တကယ်လို့ Print ထုတ်မယ်ဆိုရင် လိုချင်တဲ့စာရွက်ဆိုဒ်ကိုရွေးပြီးအားပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ထက် သိတဲ့ကိုကိုမမတွေက ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပေးပါလိမ့်မယ်။
Copy Command ကို co, (or) Cp, ရိုက်ထည့်ပြီသုံးတာကတော့ပုံမှန်သုံးနေကျပေါ့။ Command Alies ကို C လို့ပြင်လိုက်တော့ Circle Commad ကိုဘာနဲ့သုံးမှာလဲ။
It is bette to add &quot;._&quot; at in front of autocad comand ( for lsp).
(command &quot;._zoom&quot; &quot;extents&quot;)
(command &quot;._filedia&quot; 1)
(command &quot;._cmddia&quot; 1)
(command &quot;._fill&quot; &quot;ON&quot;)
(command &quot;._-plot&quot; &quot;n&quot; &quot;&quot; &quot;previous plot&quot; &quot;&quot; &quot;N&quot; &quot;Y&quot; &quot;Y&quot;)
(command &quot;._DELAY&quot; 500)
&quot;._&quot; means any language understanding! so, your lsp file can run under any language ( Frence, Japan, China, or whatever).
အကောင်းဆုံးက ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ shortcut ကို Command Alies မှာမပြင်ခင် အရင် command မှာ ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦး...
မရှိမှ.unknown command လို့ပြောမှ အဲဒီ စာလုံး (shortcut) ကို သုံးသင့်ပါတယ်...
co ,cp လို နဂိုကတည်းက အဆင်ပြေပြီးသား command တွေကို မပြောင်းသင့်ပါဘူး...
အထက်ကမေးခဲ့သလို circle အတွက် C မဟုတ်တော့ ရင် သူ့အတွက် တစ်မျိုးထပ်ရေး..မရေးချင် toolbar က ခေါ်သုံး..
မသုံးချင်ရင် circle လို့သာအပြည့်ရိုက်သုံးရမှာပါ... Command Alies ကိုသုံးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်.. :)
ဒါလေးက ကျွန်တော် တစ်ခြား forum တစ်ခုမှာ မေးထားတာလေးကို ဖြေပေးထားတာပါ..
အလုပ်ခွင်ထဲက လူတွေ..အထူးသဖြင့် စလုံးမှာ ပိုတွေ့ရမှာပါ...ဖတ်ကြည့်လို့ မရှင်းရင်ထပ်မေးနိုင်ပါတယ်.. :)
ှQ;..မူရင်း ဖိုင်ကို save as လုပ်ပြီး နောက်ဖိုင်တစ်ခု လုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ အားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပြီး အသစ်ပုံစံ လုပ်လိုက်တယ်။ လိုချင်တာက layer တွေ၊ ဘာတွေ ညာတွေပေါ့လေ။
အသစ်ထပ်မလုပ်ချင်လို့ ဖိုင်တစ်ခုကို copy လုပ်တဲ့ပုံစံ လုပ်ပြီး template တစ်ခု လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။ အဲဒီမှာ ပြသနာ နည်းနည်း ပေါ်လာတယ်။
မူရင်းဖိုင်မှာ 100 mm ပတ်လည် rectangle ထဲမှာ Hatch ချယ်တဲ့အခါ အိုကေတယ်။
အဲဒီမူရင်းဖိုင်ကနေ save as လုပ်ထားတဲ့ နောက်အသစ် ဖိုင်မှာ 150mm ပတ်လည်ရှိတဲ့ rectangle ထဲမှာ Hatch ချယ်လိုက်တဲ့အခါ Hatch တွေပေါ်မလာတော့ဘူး။ Hatch Type &amp; Scale ကလည်း အတူတူပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ခါ အရမ်း Hatch ကအရမ်း သေးနေလို့ ပေါ်မပေးဘူးတဲ့။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့ Hatch တွေအရမ်းကြီးနေလို့ မလုပ်နိုင်ဘူး တဲ့။
Line Type တွေမှာလည်း အဲလိုမျိုး ကြုံရတယ်။
အဲဒါ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲခင်ဗျာ။ ဘာလို ဖြေရှင်းရင် ရပါသလဲ။
ANS;Autocad မှာ ပေလက်မကို အခြေခံတဲ့ စနစ်Imperial ( acad.dwt) နဲ့ mm ကို အခြေခံတဲ့Metric ( acadiso.dwt) unit မတူတဲ့ template နှစ်ခု ရှိပါတယ်..
autocad software ကို စဖွင့်တည်းကို က file တစ်ခုကို အသင့်ဖွင့်ထားပေးပါတယ်..drawing 1 ဆိုပြီးတော့ပေါ့...
အဲဒါ ...အခုနပြောတဲ့ unit မတူတဲ့ template နှစ်ခု ထဲက တစ်ခုနဲ့ ဖွင့်ထားပါတယ်..အဲဒီ template file တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဟာ
in နဲ့ mm ဆိုတဲ့ အတွက် 25.4 ဆကွာပါတယ်..အဲဒါကြောင့် ညီလေး ဂျာမေးသလိုဖြစ်နေတာပါ....သက်ဆိုင်ရာ units နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ template
အတွဲကို အမြဲသုံးမယ်..သူများ file ကိုလဲ ကိုယ့်ဆီရောက်တဲ့ အခါ အဲလိုပြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲ ကိုယ်သုံးနေကြ setting လေးတွေရှင်သန်နေမှာပါ ...
ှQ ; အကိုရေ..အဆင်မပြေလို့ ထပ်မေးပါရစေနော်။
ကျနော် အခု ဖိုင် သုံးခု ဖွင့်လိုက်တယ်။ A, B &amp; C ပေါ့။ A က ကျနော့်အလုပ်က ဆွဲလက်စ ဖိုင်။ B က main con ဆီက ရတဲ့ ဖိုင်။ C ကတော့ ဘာမှ မဆွဲရသေးတဲ့ metric unit ဖိုင်အသစ်တစ်ခု။
အရင် A, B &amp; C သုံးခုလုံးမှာရှိတဲ့ Units တွေ အရင် တူအောင်ပြင်လိုက်တယ်။ Drawing Units မှာ Length Type .. Decimal, Precision .. 0.0000, Angle Type .. Decimal Degrees, Precision ..0/ Insertion Scale .. Millimeters အားလုံးအတူတူထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ 500mm x 500mm rectangle တစ်ခုကို A ဖိုင်မှာ ဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးရင် Hatch ကို Dot Type ချယ်ပြီး Scale က 20 ထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ copy with base point နဲ့ B နဲ့ C ဖိုင်တွေဆီကို ကူးလိုက်တယ်။ အဲထိ အိုကေပဲ။ အဲဒီကမှ B ဖိုင်မှာ rectangle ကိုပဲ copy ကူးပြီး Hatch ချယ်ကြည့်တယ်။ စောနက setting အတိုင်းပဲ။ မရတော့ဘူး။ အရမ်းသေးသွားတယ်။ အဲဒါတင်မဟုတ်ဘူး။ Match Prop သုံးပြီး တို့လိုက်တော့လည်း သေးသေးလေးပဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အတူတူမဖြစ်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ နောက် C ဖိုင်မှာလည်း အဲလိုပုံစံမျိုး စမ်းကြည့်တယ်။ C ဖိုင်မှာ အိုကေသွားတယ်။ B ဖိုင်တစ်ခုတည်းမှာပဲ ပလုံ ပလုံ ဖြစ်နေတာ။ အဲဒီလိုက ခဏခဏ ဖြစ်တယ်။ Line type တွေမှာလည်း အဲလိုပဲ။ Hidden တွေသုံးရင် တစ်အား သိသာတယ်။... အဲဒါလေး ပြန်ပြီး ဖြေပေးကြပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ANS;မအားတာနဲ့ နောက်ကျနေလို့ ဆောရီးပါနော်...ညီပြောတဲ့ မိန်းကွန်း ဆီကလာတဲ့ file ကိုက အဲဒီ်file စဖွင့်ထဲက acad.dwt နဲ့ ဖွင့်ပြီး..unit ကျမှ decimal ..mm ပြောင်းထားတာမျိုးဖြစ်လို့ပါ..
အဓိကက အဲဒီသဘောပါ..ဖွင့်တဲ့ template ဖိုင်နဲ့ ဆွဲတဲ့ unit မကိုက်တာပါ...commandline မှာ &quot; measurement &quot; လို့ရိုက်ထည့်ပါ...
အဲဒီအခါမှာ တန်ဖိုးက ၀ ဆိုရင် acad.dwt အခြေခံပါ.... တန်ဖိုးက 1 ဆိုရင် acad.diso အခြေခံပါ....
အခုနက မရဘူးဆိုတဲ့B file မှာ measurement လို့ရိုက်ထည့်ပြီး....၀ ဆို 1 ပြောင်းရိုက်..ထို့အတူပဲ 1 ဆို ၀ ပြောင်းရိုက်လိုက်ရင် A နဲ့ C ဖိုင်နဲ့ တူတဲ့ စကေးတန်ဖိုးတွေအဆငိပြေပါလိမ့်မယ်..
ကျွန်တော် ရုံးက ကွန်ပျူတာနဲ့ ပုံဆွဲထားတဲ့ dwg File ကို CD နဲ့ကူးပြီး အခြားကွန်ပျူတာထဲ ထည့်ဖွင့်တော့ ပုံမှာပါတဲ့ မြန်မာဖောင့်တွေ (win innwa Font) အားလုံးက မြန်မာလို မပေါ်ပဲ
အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပေါ်နေတယ်ဗျ။ မြန်မာလို ပေါ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အရင် autocad ကို ပိတ် ..နောက်Autocad install လုပ်ထားတဲ့ folder ထဲက font folder ထဲကို win innwa Font copy ကူးထည့်ပြီး
ပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးကြည့်ပါလား... :)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ် ။
3D Face (3f) ကိုသုံးပြိး ဆွဲတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေက အပိုင်းပိုင်းဖြစ်နေတာကို မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြင်လို့ရမရသိချင်ပါတယ်..........
edge ဆိုတဲ့ command သုံးပြီး face နှစ်ခုဆုံတဲ့ diagonal edge တွေကို select လုပ်ပြီး..command line မှာပေါ်တာဖတ်ပြီး..hide ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ..
အဲဒါက autocad နဲ့photoshop ဆက်စပ်တာလေးပါ ... autocad ထဲက ပုံကိုphotoshop နဲ့ပြင်တယ်ဆိုတာကို စနုိးမသိလို့ ..စနုိးပုံပဲဆွဲတတ်တာ ...
အခု autocad post တွေထဲမှာလည်း လိုက်ရှာဖတ်ကြည့်နေတာ စနိုးမျက်စိပဲ၇ှမ်းတာလားမသိဘူး ..ရှာလို့ကိုမတွေ့ဘူးအကိုေ၇..
အဲဒါက autocad နဲ့ render လုပ်ပြီးသွားရင်...file save ရတယ်မလား(file types တွေကတော့..ဥပမာ..jpeg,bmp,tiff.tga...etc)..ရလာတဲ့ file ကို photoshop နဲ့ဖွင့်ပြီး..
ကိုယ် ဖြည့်ချင်တာလေးတွေ ဖြည့်တာမျိူးပါ။အဲဒါကို သိချင်ရင် photoshop သင်တန်းတက်လိုက်ရင် ဘာတွေလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာ
သိလာမှာပါ။..အခု စနိုးအနေနဲ့က ..ဥပမာ...ဆိုင်ကယ် နဲ့ ဖုန်းနဲ့ ဘယ်လိုတွဲသုံးရမလဲလို့ မေးတာမျိူးပေါ့..
ရိုးရိုးပဲလေ..ဆိုင်ကယ်စီးနေတုန်း..တစ်ခြားသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်စကားပြောလို့ရတာပေါ့..ဒါပေမယ့် phone ဆိုတာ ဘာလုပ်တာလဲ..
ဘာလုပ်တာလဲလို့သိပြီးရင်..ဘယ်လိုသုံးတာလဲ..အဲလိုမှ အခုနလို ဆိုင်ကယ်စီးနေတုန်း..ph ပြောလို့ရမှန်းသိပြီးပြောနိုင်မယ်ဟုတ်.. :)
http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/board,68.0.html ဒီနေရာမှာ အများကြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်..
ဒီနေ့ ဟိုဟိုဒီဒီ စာလိုက်ဖတ်ရင်း ကျမအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ command လေးတစ်ခုကို သိလိုက်ရပါတယ်။
အေ၇ာတို့လည်း အဲဒါမျိုးကို Word မှာတော့ သုံးဖူးတယ် Find ရယ် Replace ရယ်ကိုပေါ့။
Find လုပ်တာမှာ Text ရိုးရိုးကို ရှာတာမဟုတ်ပဲ Pull down menu တွေဖြစ်တဲ့ Format, Special စတာတွေကို ဆက်ဖွင့်ပြီး သုံးနိုင်လျှင် ပိုမိုအသုံးတဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
Format &gt; font&gt; Size စသည်ဖြင့် ဆက်သွားပြီး Text မတူတဲ့ စာလုံးတွေကိုပါ တူညီတာတစ်ခုခုအပေါ်အားကိုးပြီး အဆင်ပြေအောင်မွန်းမံပြင်ဆင်မှု လုပ်လို့ရပါတယ်။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် စာသားတွေ စရိုက်စဉ်ကတည်းက စာတွေကိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အုပ်စုပိုင်းခြားပြီး ကျန်တာတွေနှင့်ကွဲပြားအောင် ကြိုရိုက်ထားသင့်တယ်ဆိုတာပါ။
ဥပမာ ပြည်တွင်းမှာစာစီစာရိုက်ကြရာမှာ မြန်မာစာလုံးကို Size 14 ထားပြီး English စာလုံးဆို Size 12 ပဲထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှ နောင် အလိုရှိတဲ့အခါ Size 12တွေ အားလုံးကို အပြာရောင် ပြောင်းပစ်မယ် စသည်ဖြင့် လွယ်ကူစွာအမိန့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာလေးမှာ ဒီလိုလုပ်လို့ရလျှင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးနှင့် တောင်းဆိုမှုတွေအတွက် Software ဖန်တီးသူများက အတတ်နိုင်ဆုံး စွမ်းဆောင်ဖြည့်ဆည်းထားပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။
User တွေအနေနှင့် သူတို့ပေးထားတာတွေ အကုန်မသုံးတတ်ကြတာမှန်ပေမယ့် အခုလိုမျိုး တစ်ဦးသိတာကို ကျန်သူများလည်း အသုံးတည့်အောင်မျှဝေပေးကြမယ်၊ ကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်လံရှာဖွေမယ်ဆိုလျှင် မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာမှာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီက သူငယ်ချင်းတို့ auto cad ထဲက ပုံတွေကို report ရေးဖို့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် assignment တွေ စာတမ်းတွေမှာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် MS Word ထဲ ကို Image အနေနဲ့ တင်ချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ မသိဘူးနော်... ကျနော် ဟိုတလောကမှ တွေ့ထားတာလေး ပြောပြမလို့...
အရင်ကတော့ အဲဒီလို image လိုချင်ရင် screen shot နဲ့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်... jpgout ဆိုတဲ့ command နဲ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်.... ဒါမှမဟုတ် pdf converter ကနေ pdf/ jpeg နဲ့ print ထုတ်ပြီး လုပ်နေခဲ့တာ... ဒါပေမဲ့ ရလာတဲ့ image ရဲ့ resolution ကို ဘယ်လိုမှ စိတ်တိုင်း မကျခဲ့ဘူး... ပြီးရင် ပုံလေး တခု ရဖို့ procedure ကလဲ များ...
အဲဒါနဲ့ resolution ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ရှာရင်းနဲ့ အဲဒီ နည်းတွေထက် ပို အသုံးဝင်တဲ့ command လေး တခု ဟိုတလောကမှ ရှာဖတ်မိတယ်... ဘယ် အချိန်ထဲက autocad ထဲ ပါနေမှန်းတောင် မသိဘူး... အဲဒါက &quot;Edit (pull down menu) &gt; Copy Link &quot; ဆိုတာလေးဘဲ...
လုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်ကလဲ ရှင်းရှင်းလေး... ကိုယ် လိုချင်တဲ့ ပုံဆိုဒ် အနေအထား/ line weight/ လိုချင်တဲ့ အရောင် စတာတွေကို screen ပေါ်မှာ ချိန်ထားလိုက်... ပြီးရင် Edit &gt; Copy Link လေး နှိပ်လိုက်... နောက် MS Word ဘက် သွားပြီး paste လုပ်လိုက်.. ဒါဘဲ...
autocad background ဘာအရောင် ဖြစ်နေနေ word ဘက်မှာ အဖြူနဲ့ဘဲ ပေါ်ပါတယ်... resolution ကလဲ တခြားနည်းတွေထက် သိသိသာသာကြီးကို ပိုကောင်းတယ်... မြန်လဲမြန်... hassle free လဲ ဖြစ်... မကောင်းဘူးလား... ;)
တချို့တွေလဲ သိပြီးသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ... ရှေ့မှာ ရေးထားပြီးသားလားတောင် မသိဘူး... ကျနော်ကတော့ ညံ့ချက် ဟိုတလောကမှ သိတယ်... &gt;:(
ဟုတ်တယ် ကို MZ ရေ.. တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ ဆွေးနွေးချက်ပါ... သူက ကျနော်တို့Keyboard မှာရှိတဲ့ print screen ခလုပ်ကလေးကို အသုံးပြုရပုံမျိုးပဲ.. အားသာချက်က အစ်ကိုရှင်းပြသလို white screen နဲ့ ပေါ်တာ.. အသုံးပြုရ လွယ်ကူတာ.. တစ်ခုရှိတာက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို copy link မလုပ်ခင် စိတ်တိုင်းကျ setting အရင်လုပ်ဖို့ လိုတာပါ ( ဒါကတော့ print screen သုံးရင်လည်း အတူတူပါပဲ လုပ်ရမှာပဲ ).. နောက်အားသာချက်တစ်ခုက ကိုယ်ဖော်ပြချက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေး တစ်ခုကိုပဲ အကျယ်ချဲ့ ဖော်ပြလိုရင် AutoCAD screen မှာ Zoom နဲ့လိုတိုးပိုလျော့လုပ်ပြီး ချိန်သားကိုက်ပြီးမှ အစ်ကိုပြောတဲ့ copy link ကလေးသုံး Word မှာ powerpoint မှာ သွား paste လုပ်... အတော်နှိပ်တဲ့ ဟာလေးဗျ :4:
ကျနော်တို့ အနေနဲ့file size ကြီးမားတဲ့ Drawingတွေ loading များတဲ့ Xrefs ဒါမှမဟုတ် 3D geometry file တွေကို အမြဲတမ်း အသုံးပြု လုပ်ကိုင်နေရတဲ့အချိန် ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တခြား Autodesk VIZ , Autodesk Inventor နဲ့Miscrosoft Office applications တွေ အသုံးပြုနေရမယ်ဆိုရင် Defragmented လုပ်ပြီးပါလျက်နဲ့slowdown ဖြစ်နေတာမျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ..
ဒါက Virtual memorey ရဲ့Random Access Memory ( RAM ) အနေနဲ့swap files တွေကို recording လုပ်နှုန်း ( Memory Disk ကို Paging လုပ်နှုန်း ) ပြည့်သွားတဲ့ သဘောဖြစ်နေပါတယ်.. ဒီအခါကျရင်တော့ ထိုင်စောင့်နေတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ...
crashing လုပ်တာထက်စာရင် (ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့တာထက်စာရင် ) ဒီအတိုင်း ထိုင်စောင့်နေတာက ပိုကောင်းတယ်မဟုတ်လား..
ဟဲ..ဟဲ.. နောက်တာပါ..တကယ်တော့ ဒါဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး.. ဒီအခြေအနေတွေကို ကျော်လွားနိုင်ဖို့နည်းကောင်းလေး တွေ့ ထားတယ်...
၁။ Control Panel ကိုသွားပါ system and maintenance ကို ပုံပါအတိုင်း သွားပါ
၂။ System ဆိုတာကို Clip ပါ.
၃။ဘယ်ဘက်က Tasks တွေထဲက Advanced System settings ကို clip ပါ..
၄။system Properties Menu Box ပေါ်လာတဲ့အခါ ပုံပါအတိုင်း Advanced အောက်က Performance ကိုသွားပြီး Settings ကို Clip ပါ..
၅။ပုံမှာ မြင်တွေ့ ရတဲ့အတိုင်း Performance Options အောက်က Virtual memory မှာ Change ဆိုတဲ့ Button ကိုနှိပ်ပါ ( အဲဒီမှာ ကျနော့် ကွန်ပျူတာအတွက် total paging file size ဟာ 1313 ပဲ ရှိနေတာကို တွေ့ ရပါမယ် )
၆။ ပေါ်လာတဲ့ Virtual box မှာ အနီ ပြထားတဲ့ Mark ကလေးကို ဖြုတ်ပြီး အောက်ဘက်က Custom size ကို ရွှေးပေးပါ..
၇။ ပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း initial size နဲ့Maximum size ကို သတ်မှတ်ပေးရပါမယ်..
ပထမဆုံး.. initial size ကို ၂ ဆ လုပ်ပါမယ်.. ဥပမာ RAM 1 G အတွက် 2048 သတ်မှတ်ပေးပါမယ်..
ဒုတိယအနေနဲ့Maximum size ကို ၃ ဆ လုပ်ပါမယ်.. ဒီအတွက် ပုံမှာ 3072 သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာ.. မြင်ရပါမယ်..
တတိယအနေနဲ့ တော့ အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးရင် set လုပ်လိုက်ရင်.. ပြီးပါပြီ..
set လုပ်လိုက်တာနဲ့သူက restart လိုက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်..
ဒီအဆင့်ဆင့်တွေက Vista သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ.. XP သုံးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့
Start Menu &gt; Settings &gt; Control Panel &gt; System properties ရဲ့Advanced tab အောက်က Performance ကိုသွားတာနဲ့ 
Performance Options Menu box ပေါ်လာပြီး အောက်ဆုံးက virtual memory မှာ သွားချိန်းလိုက်ရုံပါပဲ.. အတူတူပါပဲ..အ၀င်အထွက် မတူတာလေးတစ်ခုပဲ..
သိပြီးသားတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားကိုကိုမမတွေ တင်ထားတာရှိနေရင် ကျနော်ကိုပြောပါ ဒီပိုစ့်ကို ဖျတ်ပေးပါ့မယ်
find and replace ထက် စိတ်ချရတဲ့ command လေးတခု ပြောပြမလို့ပါ။(ကျနော် ခံထားရဖူးတော့ ပိုစိတ်ချရတာလေးကိုပေးတာပါ :4: :4: :4:)
help မှာသွားရှာရင် ဒီလိုပေါ်ပါလိမ့်မယ်
၃။ဥပမာဗျာ Text value နဲ့ ကောက်မယ်ဆိုပါတော့ ဒီလို
လုပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ကောက်ချင်တဲ့ နေရာကို window select လုပ်ပါ။သူကောက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါဆို သူကောက်ပေးတဲ့ကောင်မှာ ကိုယ်ကြိုက်သလိုအားပေးလိုက်ပါ Ctrl+1 နဲ့ ပြောင်းပေါ့ဗျာ
၅။တကယ်လို့ နောက်တမျိုးအားပေးချင်သေးတယ် ဆိုရင် ဒီလို
အဲလိုမှမဟုတ် ရင် Edit ဆိုပြီးကိုယ်ပြောင်ချင်တဲ့ value ပေးပြီး အဟောင်းကို delete လုပ် နောက် Add လိုက်ပြီး အားပေးလိုက်ပါ။
လိပ်ရေ..အားပေးနေရတာနဲ့တင် တော်တော်မောနေပြီ.. :P
အကျိူးရှိတဲ့ tip လေးပါ.. :)
ဒီလို ပို့တွေ မျှော်လင့်လျှက်
filter လုပ်တာလေး ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုလိပ်ကြီး...
find &amp; replace မှာ ရှိတဲ့ အားနည်းချက်လေး ပြောပြပါလား ခင်ဗျာ...
ကိုလိပ်ကြီး ခံထားရတာလေး ကို ကျနော်တို့ မခံရဘဲ သိသွားရတာပေါ့... :4:
ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ။ .sat file ကကျွန်တော့်အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ .sat နဲ့မှဖွင့်လို့ရတဲ့ Software ကိုသုံးရင် တခြား Software တွေခံပြီးသုံးနေရတော့အလုပ်ရှုပ်တယ်လေ။ အခုလိုမျိုးသိရတော့ကောင်းတာပေါ့။ sat file ကိုကော AutoCAD နဲ့တိုက်ရိုက် ဖွင့်ကြည့်ချင်ရင်ကောရလား။ ရရင်ပြောပြပါလားဗျာ။ ဒီ AutoCAD ခေါင်စဉ်အောက်မှာ ရေးတဲ့သူတွေ အကုန်းလုံးကို လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Title တစ်ခုဖတ်လိုက် ကျေးဇူးတင်လိုက်နဲ့ ဆိုတော့ ဒီက Connection ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းဘဲလေ။ ဒါကြောင့် ဒီကနေဘဲ အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တယ် အားလုံး ကျေးဇူး.........
ကို MZ ရေ ကျနော်ဒီအောက် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,359.msg39483.html#msg39483)မှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ပိုစ့် #74 မှာပါအကို
auto CAD နဲ့ .sat file ကို ဖွင့်ရတာလည်း လွယ်ပါတယ်..
command က acisin ပါ...ပြီးရင် sat file လေးကို ရွေးပြီး Open လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ...
ကို MZ ရေ ကျနော်ဒီအောက် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,359.msg39483.html#msg39483)မှာ ရေးပေးထားပါတယ်။ပိုစ့် #74 မှာပါအကို
အဲဒါကို ကိုကိုတွေက 0A ဆိုပြီးအားပေးထဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ Find Command ကို အားကိုးပြီး 0A ကနေ 1 ကိုအားပေးတာပေါ့ဗျာ အားလုံး အဆင်ပြေပါသွားပါ တယ် ဒါပေမယ့် Electrical Single Line Diagram မှာ လွှဲတာပဲ ခင်ဗျ
ကျေးဇူးပါ ကိုလိပ်ကြီး... ကျနော်လဲ အဲဒါ ခဏခဏ ဖြစ်တတ်တယ်.. :haha:
အမှန်တော့ သူလဲ text ကို filter လုပ်ပြီး string by string replace လုပ်တာပါဘဲ... ကျနော်တို့ သတိထားဖို့က ကိုယ် ပြောင်းချင်တဲ့ text ထဲမှာ ပါတဲ့ စာလုံး အရေအတွက်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ လိုတာပေါ့လေ... ဥပမာ character3လုံးပါတဲ့ 100, 200, 300 ကို 101, 201, 301 ပြောင်းမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပေးမှာက 00 ကို 01 ဆိုပြီး run မှာပေါ့နော်.. အဲဒီမှာ ၃ လုံး ထက် ပိုများတာ တို့ (ဥပမာ 1000) နည်းတာတို့ ပါ လာပြီဆိုရင် ကမောက် ကမ တွေ ဖြစ်ကုန်တော့မှာဘဲ...
အဲဒါကြောင့် ကျနော်ကတော့ ပြောင်းချင်တဲ့ text ကို အရင် select လုပ်ပြီးမှ find &amp; replace command ကို run ပါတယ်...
ကျွန်တော်နေ့ခင်းက ရုံးမှာAutocad 2011 တင်ပြီး စမ်းကြည့်တာ တန်ဖိုးရှိတာလေး တစ်ခုတွေ့တာနဲ့ ဝေမျှလိုက်တာပါ။
3 ds max သုံးတဲ့သူတွေတော့ ပိုသိမယ်ဗျ.အခုဟာက layiso လိုသဘောပါပဲ..ဒါပေမယ့်ကွာတာက
သူက ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ object တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အများပေါ့ ... အဲဒါတွေပဲ ချန်ထားပြီး ကျန်တာတွေ hide ဖြစ်သွားတဲ့ command နဲ့
အခုနလိုပဲ ရွေးလိုက်တဲ့ object ot objects တွေပဲ ပျောက်သွားပြီး ကျန်တာတွေရှိနေခဲ့ တာမျိူးပေါ့...
layer တွေကလဲ မပိတ်ဘူးနော်..အဲဒီ object တွေပဲ hide ဖြစ်သွားတာပါ။
HIDEOBJECTS ကအရွေးခံရသော object များ hide ခြင်း
ှုISOLATEOBJECTS ကအရွေးခံရသော object များ မှ အပ ကျန်သော object များ hide ခြင်း ပါ။
အဲ..ပြန်ခေါ်ဖို့ command မသိရင်တော့ သေပြီဆရာပဲ..း)
ဒီလိုလေး အားပေးလိုက်ရင် hide ထားတာတွေ ပြန်ပေါ်လာမှာပါ..
UNISOLATEOBJECTS နဲ့ အထက်က ၂ ခုစလုံးအတွက် ပြန်ဖော်လို့ရပါတယ်...
ရိုက်ရတာ command က ရှည်တယ်ဆိုရင်တော့ express tool က Command aliases ကို သွားပြီး shortcut လုပ်လိုက်ပေါ့နော်.. :)
ကိုပါကြီး Print လုပ်ရင်ရော အဲဒီ Hide လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း out လို့ ရတာပေါ့နော့....
အဲဒီ ရွှေးထားတဲ့ Object တွေကို hide လုပ်တဲ့ Command လိုပဲ print လုပ်တဲ့အခါ မထင်ရှားစေလိုတဲ့ Object တွေကို အမိန် result ထွက်မယ့် Command မျိုးရော ပါဘူးလား..
အဲဒါဆိုရင်တော့ တော်တော်သက်သာမယ်... ;D
print ထုတ် ရင် လဲ အဆင်ပြေပါတယ်...း)
ကိုဖြိူးမေးတာက print ထုတ်တဲ့အခါ screening လုပ်ချင်တဲ့ 0bject တွေအတွက် command ကို
မေးတာဟုတ်..အဲဒါတော့ မတွေ့မိသေးဘူးဗျ။ အဲလိုလုပ်လို့ရပါတယ်..ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပေါ့..
ကိုဖြိူးထုတ်မယ့် plot စတိုင်မှာ ကာလာ တစ်ခုလောက်ကို edit လုပ်ပြီး screening value ကို
ကိုယ်လိုချင်သလိူလျှော့ထားပေါ့ ။ကျွန်တော်က အဲဒီ screen လုပ်ထားတဲ့ color နံပတ်အတိုင်း
ကာလာချိန်းတဲ့ command လေးကို အဲဒီ ကာလာနံပတ်အတိုင်း micro ရေးထားလိုက်တယ်။
ပြီးရင် ပုံထုတ်ခါနီး အခုနလိုစိတ်ကူးပေါ်လာခဲ့ရင် အဲဒီ color နံပတ် command နဲ့ ဖျော့ချင်တဲ့ objects
တွေကို ရွေးပေးလိုက်တယ်။..နောက်တစ်မျိူးကတော့ အဲဒီ ကာလာအရောင်နဲ့ layer တစ်ခုလုပ်ထားလိုက်တယ်လေ..
အဲဒါဆို ဖျော့ချင်တဲ့ objects တွေ select လုပ်ပြီး အဲဒီ layer ထဲ ချိန်းလိုက်ရုံပါပဲ..း)
ကျွန်တော်နေ့ခင်းက ရုံးမှာAutocad 2011 တင်ပြီး စမ်းကြည့်တာ တန်ဖိုးရှိတာလေး တစ်ခုတွေ့တာနဲ့ ဝေမျှလိုက်တာပါ။
3 ds max သုံးတဲ့သူတွေတော့ ပိုသိမယ်ဗျ.အခုဟာက layiso လိုသဘောပါပဲ..ဒါပေမယ့်ကွာတာက
Isolate ကို right click နဲ့ ခေါ်လို့လည်း ရတာ သွားတွေ့လို့ ထပ်ဖြည့်ပေးတာပါ...
ကိုဖြိူးမေးတာလေးတွေ့လို့ထပ်ပြောပါရစေ...ဟီဟိ(ပြောချင်လွန်းလို့ မေးတဲ့သူရှာနေ၏) ;D
ူlayer style မှာ transparency ဆိုတဲ့ option တစ်ခုထပ်ပါလာပါတယ်။
screen လုပ်ချင်တဲ့ layer မှာ transparency နေရာ click ချလိုက်မယ်ဆိုရင်0ကနေ 90 အထိစိတ်ကြိူက်ရွေးချယ်
သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ကောင်းတာက သူက model space ထဲမှာကို မှိန်သွားပါတယ်။
ဥပမာ ...plan တစ်ခုပေါ်မှာ rectangle တစ်ခုဆွဲပြီး hatch ကို solid ဖြစ်ဖြစ် pattern ကို scale စိပ်စိပ်နဲ့ဖြစ်စေ
ခြယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အောက်က objects တွေ ကိုကွယ်နေမှာပါ။အဲဒီ hatch ကို layer တစ်ခု သပ်သပ်လုပ်ပြီး
အခုနက transparency တန်ဖိုးတွေ တင်ထားရင် တင်ထားသလောက် အောက်က object တွေကို ဖောက်မြင်နေရမှာပါ။
နောက်တစ်ခါ print ထုတ်ရင်လဲ screen ဖြစ်နေမှာပါ။အဲ..print ထုတ်တဲ့ အခါမှာတော့ plot dialogbox မှာ plot transparency ဆိုတာလေးကို
check box မှာ tick လုပ်ခဲ့မှ screen ဖြစ်မှာပါ။ :)
AutoCAD User အများစု သိကြတဲ့ Command ကတော့ MATCHPROP ဆိုတဲ့ Command ပါ။
အသုံးပြုဖို့အတွက် Standard Toolbar က Match Properties Button ကိုဖြစ်စေ Command Line မှ Short Cut MA ကိုဖြစ်စေအသုံးပြု၍ ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Match Properties Command ဟာ အရာဝထ္တုတစ်ခုရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို နောက်တစ်ခုဆီကို ကောပီ လုပ်ချင်တဲ့အခါ သုံးစွဲရတာ လွယ်ကူလွန်းတဲ့ Command တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမတို့ တခါတရံ သတိပြုဖို့ မေ့နေတတ်တာကတော့ Match Properties မှာလည်း Setting တစ်ခု ရှိတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အရာဝထ္တုတစ်ခုရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေဆိုတာ COLOR, LAYER, LINETYPE, LINETYPE SCALE, THICKNESS စာတွေကို ခေါ်တာပါ။
ကျမတို့က မူရင်းအရာဝထ္တုမှ COLOR PROPERTIES ကိုသာ နောက်ထပ် အရာဝထ္တုသို့ ကော်ပီကူးယူလိုတဲ့အခါ PROPERTIES SETTING Dialogue Box ထဲမှာ Color တစ်ခုတည်းကိုပဲ ရွေးချယ်ရမှာပါ။
ဂုဏ်သတ္တိအားလုံးကို ကူးယူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အားလုံးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Match Properties Settings ပေါ်အောင်လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းလေးကတော့
MATCHPROP ဆိုတဲ့ Command ကိုအရင်ပေးပါ။
Select Source Object: လို့ Command Line မှာမေးလိုက်ရင် မူရင်းအရာဝထ္တုကို ရွေးချယ်ပါ။
Select Destination Object (s) or [ Setting ] : လို့ထပ်မေးလာရင် Setting Box ကိုလိုချင်တဲ့ အတွက် S လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် MATCHPROPERTIY SETTING BOX ကိုတွေ့ရမှာပါ။
အသစ်တွေ ဘယ်လိုကောင်းကောင်း အဟောင်းကိုတော့ တစ်လည်လည်တဲ့
ဘယ်လောက်ပဲ ဗားရှင်းမြင့်တာတွေကို သုံးနေပါစေ တစ်ခါတစ်လေတော့ အော်တိုကဒ် ဗားရှင်း အဟောင်းလေးတွေကို လွမ်းမိပါတယ်။
အော်တိုကဒ်ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပေါ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ Startup Dialog Box လေးကိုလည်း လွမ်းမိပါတယ်။
အော်တိုကဒ်မဆွဲခင် Unit ရွေးချယ်ဖို့, Template ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Dialogue Box လေးပါ။
လိုအပ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုခေါ်ယူရတယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ကြည့်ရအောင် .. ..
Command Line ကနေ STARTUP လို့ရိုက်ထည့်ပီး Enter ရိုက်ပါ။
Enter new value For STARTUP ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေး ပေါ်လာပါမယ်။
Zero ပေးရင်တော့ AutoCADကို စစခြင်းမှာ Startup Box ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
One ပေးလိုက်ရင်တော့ ပုံမဆွဲခင်မှာ Startup Box လေးကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မကေပီဇက်က.. MATCH PROPERTIES အကြောင်းလေးရေးသွားတော့...
MASS PROPERTIES ဆိုတာလေးကို သတိရသွားလို့.. SHARE လိုက်ပါတယ်။
Region တွေ Solid တွေရဲ့ Properties တွေကို အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့။
လေးထောင့်ပုံစံ Solid တွေမှာ သူရဲ့ Volume ကို တွက်ချက်ရတာ လွယ်ကူပေမယ့်..အကွေးအကောက်တွေလို ခပ်ရှုပ်ရှုပ်ပုံစံတွေအတွက်ကျတော့ အခု Mass Properties လေးက အရမ်းပဲ အသုံးဝင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ သူ့မှာ Mass, Volume, Centroid, Moments of inertia, Radii of gyration, Principal moments တွေပါဝင်တဲ့အတွက် ကျနော်လုပ်နေတဲ့ Precast Concrete လိုဟာမျိုးတွေမှာကျ တကယ့်ကို အရေးပါအရာရောက်လွန်းပါတယ်။
Engineering Calculationတွေ တွက်ချက်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်..
Concrete တွေကို Lifting Hook တပ်ဆင်ဘို့ Centroid တွေ Moments of inertia တွေရှာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်..
အချိန်တိုအတွင်း အချက်အလက်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သိရှိနိုင်တယ်လေ။
Menu bar အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Tool &gt; inquiry &gt; Region/Mass Properties ဆိုပီး Select Object ကို ရွှေးလိုက်ရုံပါပဲ။
Command ကို အားကိုးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ massprop ပါ။
Centroid လိုချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ သတိထားစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲဒါကတော့ UCS ကို 0,0,0 ပြန်သတ်မှတ်ပေးဘို့ပါပဲ။
ucs + enter ဆိုပြီး ကျနော်တို့သိချင်တဲ့ region လေးရဲ့ ထောင်တစ်နေရာကို နေရာချပေးရုံပါပဲ။ အဲဒီ ချလိုက်တဲ့နေရာလေးကနေစပြီး သူက centroid ကို အကွာအဝေးသတ်မှတ်ပေးမှာပါ။
300mm ပတ်လည် Box လေးတစ်ခုကို နမူနာ လုပ်ပီး ကော်ပီ ကူးပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Bounding box: X: 206.4607 -- 459.5683
Y: 113.6256 -- 215.2797
Z: 0.0000 -- 120.8901
Centroid: X: 333.0145
Moments of inertia: X: 1.0195E+11
Products of inertia: XY: 1.7034E+11
Radii of gyration: X: 181.0450
Write analysis toafile? [Yes/No] &lt;N&gt;: *Cancel*
acad.dwt &amp; acadiso.dwt
သူများတွေ ရေးမှ ရေးလိုက်အုံးမှပါလေ..ဆိုပီး သူများရေးသွားတာလေးတွေ ဖတ်ပီး အဲဒါလေးတွေနဲ့ နီးစပ်တာလေးတွေကို ထပ်ရေးလိုက်ပါတယ် 8)
မကေပီဇက်က.. startup box အကြောင်းလေးရေးလိုက်တော့ ကျနော်တစ်ခုသတိရသွားတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ရော ကျနော့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရော ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့။
ကိုယ်ဆွဲနေနဲ့တဲ့ ဖိုင်က ဘာဖိုင်မှန်းမသိဘူး။ Imperial လား၊ Metric စနစ်လား မသိဘူး။ Units မှာ ကို်ယ်ဆွဲချင်ရာ ဆွဲပီး ချတော့တာပဲ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း နဂိုဖိုင်ကို save as လုပ်ပီး ပြန်ဆွဲကြတယ်။
မှန်နေရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ မှားသွားရင်တော့ ကိုးရို့ကားယားဖြစ်တာပေါ့။
ဖွင့်ထားတဲ့ဖိုင်က Imperial စနစ်..။ ဆွဲနေတာက mm တွေနဲ့။ Imperial ဆိုတာက Ft တွေ inches တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ။
Linetype တွေ Hatch ချယ်တာတွေမှာ အဆင်မပြေဖြစ်၊ နှစ်ပုံထပ်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆို ပိုဆိုး။လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်က Metric၊ ကိုယ်က Imperial ။ ထပ်တော့ သူ့ပုံက ငယ်၊ ကိုယ့်ပုံက ကြီး။
အဆင်ကမပြေဘူး။ အဆွဲကြီး ဆွဲပီးမှဆိုတော့ တော်တော် အဆင်မပြေဘူးလေ။
Scale Reference တွေနဲ့ မရ..ရအောင်လုပ်။ အဲလိုမျိုး တစ်ချို့ ကြုံဘူးကျမှာပါ။
အဲဒီတော့ ကိုယ်စီးတဲ့မြင်း အထီးလား၊ အမလားသိရင် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ။
Auto CAD ကို ဖွင့်ဖွင့်ချင်း Template ကျလာတဲ့အခါ acad.dwt နဲ့ acadiso.dwt ဆိုတာလေးပါပါတယ်။
acad.dwt ကတော့ Imperial စနစ်ကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပြီး
acadiso.dwt ကတော့ Metric စနစ်ကို အခြေံထားတာပါ။
တကယ်လို့ မေ့သွားတယ်ဆိုရင်လည်း Template ရွှေးဘို့ ကျလာတဲ့အခါ Open ရဲ့လေးနားလေးမှာ ထပ်ပီး ဘာ စနစ်နဲ့ ဖွင့်မလဲဆိုတာကိုပါ ရွှေးလို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ် save as လုပ်မယ့်ဖိုင်က ဘာစနစ်နဲ့ဇွင့်ထားတာလဲ။ တကယ်လို့ Imperial ဖြစ်နေပီး ကိုယ်က Metric နဲ့ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။
commandline မှာ &quot; measurement &quot; လို့ရိုက်ထည့်ပါ...
အဲဒီအခါမှာ တန်ဖိုးက ၀ ဆိုရင် acad.dwt အခြေခံပါ.... တန်ဖိုးက 1 ဆိုရင် acadiso.dwt အခြေခံပါ....
measurement လို့ရိုက်ထည့်ပြီး....၀ ဆို 1 ပြောင်းရိုက်..ထို့အတူပဲ 1 ဆို ၀ ပြောင်းရိုက်လိုက်ပြီး မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ Imperial or Metric စနစ် တစ်ခုခုကို ပြောင်းလို့ရပါပီ။
acad 2010 မှာ insert tool အောက်က PDF Underlay ( command line .. &quot; pdfattach&quot; ) ရိုက်လိုက်ပါ။
ဒါလေးနဲ့ဆို PDF ဖိုင် ပုံတွေကို acad ထဲခေါ်ထည့်ပြီး snap ကောက် ထပ်ဆွဲလို့ရပါပြီ။
pdfconverter နဲ့ ပြောင်းပြီး ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ :)
XREF (External References) မှာ လည်း လုပ်လို့ ရတာလေး ထပ်ဖြည့်ပေးတာပါ...
pdf တင် မကဘဲ အခု မြင်ရတဲ့ file type အားလုံး ကို attach လုပ်လို့ရပါတယ်...
Jarmoekoko ရေးထားတဲ့ acad.dwt &amp; acadiso.dwt Template အကြောင်းလေး ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် တစ်ခုထပ်တည့်ချင်လို့ပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Template ကို Deafult ထားချင်ရင် Option Command , Enter
File Tab အောက်မှာ Deafult Template File Name for QNEW ကို Click &gt; Browse &gt; Click ပြီးရင် ကိုကြိုက်တဲ့ Template ok &gt; apply ပေါ့။
မိမိ ကြိုက်တဲ့ Template လည်း ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။
ACIS file က AutoCAD file မှာ ပြဿနာမရှိပေမဲ့ Solid Works ကနေပြောင်းတော့ ရဘူးဖြစ်နေတယ် အဲဒါနဲ့ထပ်ပြီးစမ်းရင်းစမ်းရင်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ လုပ်ပုံက Solid Works ရဲ့ Option မှာ Version ကို 7.0 နဲ့ Save Acad ကနေ ACISIN OK ပေါ့။
ကျနော်လဲပိုစ့် တင်မယ် တင်မယ်နဲ့ မတင်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားပြီ
ဒီနေ့တော့ တခုလောက်တော့ ကြိုးစားတင်လိုက်အုန်းမယ်
အရမ်းကို အဆင်ပြေတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတခုရထားလို့ပါ(အတော်များများ သိထားပြီးသားလဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်)
ကျနော်တို့ ပုံဆွဲတဲ့ အခါမှာ object တွေကို ရွေ့ချင်ရင် M ကွန်မန်းပဲသုံးတတ်ကြပါတယ်
အခုကျနော် ဆွေးနွေးမှာကတော့ ကွန်မန်း မသုံးပဲ ကိုယ်ရွေ့ ချင်တဲ့ object ကို select မှတ်နောက်ပြီး mouse left click ကို အဲဒီ object မှာ ဖိပြီး ကိုလိုရာနေရာကို ဆွဲသွားလိုက်ပါ(ကာဆာက မျှားပုံလေး ဖြစ်ပြီး အောက်မှာ လေးထောင့်ကွက် မှိန်မှိန် လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်)
အဲသတိထားဖို့က တော့အဲဒီလို left click ဖိတဲ့ကောင်က grid snap points (e.g; end points,center points,etc...) တွေကို မဖိမိပါစေနဲ့
နောက် တခုကတော့ အဲဒီတိုင်းပါပဲ ကော်ပီ ကူးလို့ ရပါသေးတယ်
အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း mouse click နဲ့ ဖိပြီးဆွဲနေတဲ့ အချိန်မှာ Ctrl key ကိုနှိပ်လိုက်ပါ (ကာဆာက မျှားပုံလေး ဖြစ်ပြီး အောက်မှာ လေးထောင့်ကွက် မှိန်မှိန် လေးမှာ အပေါင်းလက္ခဏာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်) အဲဒါဆို ဖိဆွဲခဲ့တဲ့ object က ကော်ပီကူးပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကဲဒီဟာကတော့ ကျနော်ရတဲ့ မူရင်း မေးလ်ပါ
အောက်မှာ တတ်သလောက်လေး ဘာသာပြန်ပေးပါ့မယ် (အမှားပါရင်လဲ ပွင့်ပွင့်လင်လင် သင်ပြဆွေးနွေးပေးပါ)
Training: Shift Tips
•	Press Shift with the FILLET or CHAMFER command to change the radius to0and extend to lines to meet
shift key ကိုနှိပ်ထားပြီး fillet ဒါမမဟုတ် chamfer ချိုးရင် သူ့ရဲ့ radius သုည အတိုင်းပါတဲ့ ခင်ဗျာ
•	Press and hold Shift to temporarily override ORTHO.
line ဆွဲရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ္စည်းတခုခုကို ရွှေ့နေတဲ့ အချိန်မှာဖြစ် shift ကိုဖိထားရင်ခဏတဖြုတ် ortho on သလိုလေးပါပဲနော့
•	Press and hold Shift+A to temporarily override OSNAP.
ကိုယ်တခုခု ဆွဲချင်တဲ့ အချိန်မှာ osnap ဖမ်းတဲ့ကောင်တွေက လာရှုပ်နေတယ် ဆိုရင် Shift ကီးနဲ့ A ကီး ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ osnap ကို ခဏဖျောက်ထားပေးပါလိမ့်မယ်
•	Press Shift to change bto EXTEND and vice versa.
trim command ကိုသုံးနေရင်းကနေ extend ကို သုံးချင်ရင် Shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ extend command အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်
extend command ကိုသုံးနေရင်လည်း အတူတူပဲ(ကျနော်မသိလို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုမေးပြီးတင်ပါသည်)
•	Press Shift and pick objects to remove them from the current selection set. You can also press Shift and clickawindow or crossing selection.
ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ အထဲက မှမလိုချင်တဲ့ ကောင်တွေကို ဖယ်ချင်ရင် shift ကီးကိုနှိပ်ပြီး အဲဒီကောင်(ဖယ်ချင်တဲ့ ကောင်)ကို select မှတ်လိုက်ပါ အဲဒါဆို သူကကိုယ် select မှတ်တာထဲက မပါပဲနေပါလ်ိမ့်မယ်
•	If you have several objects that overlap atapoint, mouse over that point, press Shift and press the Spacebar repeatedly to cycle through these objects
object နှစ်ခု ဒါမှမဟုတ် object တွေ overlap ဖြစ်နေတဲ့အထဲက တစ်ခုကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင် command တခုခေါ်လိုက်ပါ နောက် mouse ကို အဲဒီအပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ shift ကို နှိပ်ထားပြီးတော့ space bar ကို တလှည့်စီ နှိပ်ပေးရင် object တစ်ခုကို တလှည့်စီရွေးပေးတာပါ (ကျနော်မသိလို့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကိုမေးပြီးတင်ပါသည်)
ဒီမှာ တခုသတိထားရမှာက ဒီလိုဖြစ်နေမှ အဆင်ပြေပါမယ် မဟုတ်ရင် အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး
အပေါ်ကကောင်ကတော့ Auto CAD မှာမမဟုတ်ပါဘူး Microsoft Word,Excel စတာတွေမှာပါသုံးလို့ ရပါတယ်
ဒီလိုပါ ကို Select မှတ်ချင်တဲ့ စာရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ cursor ချပြီး shift ကီးနဲ့ home ကီးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် စာကြောင်း အရှေ့ ဆုံးထိ select မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်
ထို့နည်းအတိုင်းပဲ စာကြောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးမှာ cursor ချပြီး shift ကီးနဲ့ end ကီးကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် စာကြောင်း အနောက်ဆုံးထိ select မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်
အဲ အအောက်စာကြောင်းတွေကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် down arrow ကီးနဲ့ အားပေးပြီး အပေါ်စာကြောင်းတွေလိုချင် သပဆိုရင် up arrow ကီးနဲ့ အားပေးလိုက်ပါ။
Here are all the keyboard shortcuts I could find in AutoCAD&#039;s Help that use Shift:
ဒါလေးတွေကတော့ တခြား shift ကီးနဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ shortcut တွေပါ။
ပေါ်က ကောင်လေးတွေကိုတော့ သိတဲ့ ကိုကိုတွေက ထပ်ဖြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Find နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခု သိလာတာပြောပြချင်ပါတယ်။ electrical design ပုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာ ကုန်တိုက်ကြီးတွေလို အထပ်တွေအများကြီး circuit ပတ်လမ်းတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့ အခါ ပတ်လမ်းတွေနဲ့ သုံးထားတဲ့ lighting &amp; alarm system ပစ္စည်းတွေကို နာမည်တွေကလဲခွဲထားတော့ ပုံပြီးလို့ပြန်စစ်တဲ့ အခါ ကို့ဘာသာဆွဲတာကိုပြန်စစ်ရင် အဆင်ပြေပေမဲ့သူများဆွဲထားတာစစ်ရင် လိုက်ရှာရတာ ခေါင်းမူး ရပါတယ် ။ အဲဒီအခါ Edit&gt;Find ကိုနှိပ် circuit လိုင်းနာမည်ရွေးပေးလိုက် ။ ဥပမာ Ground Floor , R1 လိုင်းအတွက် ပုံမှာဘာနာမည်ရေးထားလဲ G1-R1 ။ အဲဒီအတိုင်းရိုက်ထည့်ပါ ။ ပြီးရင် Find ကိုနှိပ်၊ ပြီးရင် zoom in ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ။ အဲဒီစာလုံးရှိတဲ့နေရာကိုပြရင် အဲဒီနေရာလေးကို mouse wheel လေးနဲ့ zoom ကစားပြီး ကိုလိုချင်တာတွေရေတွက်လို့ရပြီပေါ့။ တကယ်လို့ နောက်ထပ်ဘယ်နှစ်နေရာရှိသေးလဲသိချင်ရင်တော့ လိုင်းနာမည်ရိုက်ထည့် Find (enter)&gt; zoom in ပြီးရင် find next ကိုပြန်နှိပ် မကုန်မချင်းနှိပ်ပြီး စာလုံးဘယ်နှစ်ခါတွေ့လဲ အဲဒီအတိုင်းအပြင်မှာလိုက်စစ်ရုံပေါ့ ။ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကျနော် သိသလောက်လေး နည်းနည်း ပြောကြည့်မယ်
find အစား filter က ပိုလွယ်မလားလို့ filter သုံးပုံ သုံးနည်းက ဒီကောင် (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,359.msg48965.html#msg48965) လေးကို အရင် ဖတ်ကြည့်ပါ။
filter မှာ text value ဆိုတာပါ ပါတယ်။
အဲဒီကောင်နဲ့ သုံးပြီး properties(ctrl+1) ကို သွားပြီး ရေရင် ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်တယ်။
ကျနော် အကြံပေးတာ တစ်ခုခု လိုရင် လည်း ဆွေးနွေးပေးပါအုန်းနော့်
အမပြောချင်တာက အဲဒီလိုင်းကိုကောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ အဲဒီလိုင်းတစ်လျောက်မှာ၇ှိတဲ့ မီးလုံးမီးသီး။ မီးခလုပ်စသည်ဖြင့်တွေကိုကောက်မှာပါ ။ အဲဒီစာ့ကစ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ ဟာပေါ့။ မောင်လေးပြောတာနဲ့ ရမရစမ်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ အကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီအောက် မှာ နဲနဲ အေး နေသလားလို့
ကျနော် ရုံးကနေ ရုပ် ခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေးတွေပါ :haha: :haha: :haha:
အော် သူများ အကျိုး အတွက် ဆိုတော့ ရုပ်ပေးရတာ တန်ပါတယ်။
အော်တိုကဒ် ၂၀၀၉၊၂၀၀၁နှင့် ၂၀၁၁ Tips and Tricks (http://www.4shared.com/dir/ZX-6cV9V/AutoCAD_200920102011_Tips_and_.html)
ကျနော်တော့ သေချာ မကလိရသေးဘူးဗျာ သိတဲ့ ကိုကိုတို့ မမ တို့ ၀င်ရှယ်ကြပါအုန်း။ အခုချိန်ဆို ကိုပါကြီးနဲ့ ဦးလေး ကျနော့် ကို အစိမ်းလိုက် ၀ါးချင်နေလောက်ပြီ (စစပြီး ဘယ်တော့ မှ အဆုံးမသတ်လို့)&lt;3 &lt;3
ဒါလေး (http://www.adskmedia.com/autocad-2011/) က အော်တိုကဒ်က ရှင်းပြထားတဲ့ မူဗီလင့်ပါ။
I cannot see the download link. Pls update the post.
ကျွန်တော်တော့ Download လုပ်တာရတယ် အကိုရေ
အဲဒီ link ကို နှိပ်လိုက်ရင် 4sharedestop ထဲရောက်သွားတယ်။အဲဒီကမှ တဖိုင်စီ ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရပါတယ်။
အကိုရေ ... ဒီလိုလေးပေါ့
အော်တိုကဒ် ၂၀၀၉၊၂၀၀၁နှင့် ၂၀၁၁ Tips and Tricks (http://www.4shared.com/dir/ZX-6cV9V/AutoCAD_200920102011_Tips_and_.html) .... လေးကို အရင်နှိပ်လိုက်ပြီး ပေါ်လာမယ့်နေရာမှာ .....
အမှတ်စဉ် (၁) ဖိုင်လေးတွေကို အရင်ရွေး .... ပြီးမှ
အမှတ်စဉ် (၂) နေရာကို click လုပ်ပြီး ကိုယ်ဒေါင်းလုပ်ချချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချလို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ပုံတွေ ဆွဲတဲ့ အခါ dimension တွေ တပ်တဲ့ အခါ ညီနေအောင် အမြဲသတိထား တပ်ပေမယ့် continous နဲ့ ဆက်သွားလဲ
နည်းနည်းလေးတွေ မညီလို့ အမြဲ ညှို ရလေ့ရှိပါတယ်.။အဲဒါတွေ အတွက် dimspace ဆိုတဲ့ command လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ပုံလေးမှာ သေချာ ပြထားပါတယ်။ ပုံ ၁ က မလုပ်ရသေးတဲ့ပုံ...ပုံ ၂ က လုပ်ပြီး သွားတဲ့ပုံလေးပါ။ :)
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်လောက်ထဲ က ကျနော်ခံလိုက်ရတဲ့ tip လေးတစ်ခု ကျနော်ဝေမျှချင်ပါတယ်။
Auto CAD 2011 မှာ Selection Cycling ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတခု ထပ်ပြီးတိုးလာပါတယ်။
အဲဒီကောင်က အခြား 3D ဆွဲမဲ့ ကိုကို မမတွေ အတွက် အရမ်း အထောက်အကူ ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။
သူ့ကို on ထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ် Select လုပ်လိုက်တဲ့ Object နဲ့ သူနဲ့ အတူထပ်နေတဲ့ ကောင်တွေကို ပြပေးပါတယ်။ကိုယ် ရွေးချင်တဲ့ ကောင်ကို ရွေးလို့ ရအောင် Dialog Box တခုကျလာပြီး ကိုရွေးချင်တဲ့ ကောင်လေးကို မှတ်လိုက်ယုံပါပဲ ဒီအောက်မှာရှင်းပြပေးထားပါတယ် http://heidihewett.blogs.com/my_weblog/2010/04/autocad-2011-selection-cycling.html
ဒါက သူရှင်းပြထားတာကို ကျနော်ကူးတင်ပေးတာပါ တကယ်လို့ ရွှေမြန်ပြည်က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အဲဒီလင့်ကို သွားလို့ မရရင်ပေါ့နော့်
AutoCAD 2011 Selection Cycling
In crowded drawings and 3D models, selecting the right object the first time can be challenging. AutoCAD 2011 providesasolution with new object cycling functionality. You can enable selection cycling fromacontrol on the status bar. Then, when you try to select an object that overlaps other objects, AutoCAD displaysalist of all the overlapping objects. As you pass the cursor over each object in the list, the relevant object in the drawing highlights enabling you to select the right object, the first time!
အဲတကယ်ကျနော် ပြဿနာက အခုမှ စမှာနော်
ကျနော်လဲ အစက အဲဒီကောင်ကို မသိပါဘူး ကျနော် လုပ်နေတဲ့ project တခုက အရမ်းကြီးတဲ့ Archi ဖိုင်တခုပေါ်မှာ Services တွေဆွဲဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အချိန်မှာ ပြဿနာစတပါပဲ တော်ရုံဖိုင် ခက်သေးသေးမှာ ဆို အဲဒီကောင် On နေလဲ ပြဿနာမရှိပါဘူး ဖိုင်ဆိုက် အရမ်းကြီးပြီ ဆိုရင် ကိုကိုက လက်စွမ်းပြတော့တာပါပဲ အဲဒီ Selection Cycling ဆိုတဲ့ကောင် ဖွင့်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်စက်က ဘယ်လောက်ပဲ မြင့်မြင့် Grid Snap ဖမ်းသလိုမျိုး Cursor က ထစ်တစ်ထစ်တစ်နဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာကို ရောက်ဖို့ အရေး နှစ်ညအိပ်သုံးရက် ခရီးသွားရ သလိုပါပဲ။
အဲဒါ လိုက်ရှာလိုက်တာ ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့ဘူး ရုံးမှာ ရှိတဲ့ CAD နဲ့ ပက်သက်ပြီး အမြဲကလိပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းနေကြ မြန်မာအကိုတွေ မြန်မာပြည် ရုံး နောက် ဒီမှာရှိတဲ့ ဆရာကိုပါကြီးကိုပါ မချန် ဖုန်းဆက်ပြီး အကူအညီ တောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံး အဖြေရတော့လဲ နှစ်ယောက်လုံးက တပြိုင်ထဲ နီးပါးပေးပါတယ် (ချစ်တယ်တဲ့) အဲယောင်လို့
ပထမ တစ်ခုက ဒီမှာရှိတဲ့ ကျရုံးက မြန်မာအကိုပြောတာပြောပြမယ်နော် သူက ပိုလွယ်တယ်။
အဲဒီ ဒီကောင်ဆိုတဲ့ Icon လေးကို အဖွင့်အပိတ် ကလစ်တချက်ထောက်လိုက်ယုံပါပဲ။
ကလစ်လုပ်ပြီး command bar မှာကြည့်လိုက်ပါ On ထားရင် Off သွားလိမ့်မယ် Off ထားတယ်ဆိုရင် On လာလိမ့်မယ် ကျနော်လိုပုံက လေးနေပြီး ပိတ်ချင်တယ်ဆို Off ဖြစ်အောင်အားပေးလိုက်ပေါ့နော်။
နောက် မြန်မာပြည်ရုံးက အကိုပြောတာလေး ပြောပြမယ်နော်။
သူပြောတာက Command : se ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်ပါ ဒီလိုကောင် ကျလာပါလိမ့်မယ် (ကျနော် command ပါမြင်ရအောင် Capture ဖမ်းပေးထားပါတယ်)
နောက်ညာဖက် အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မျှားလေးကို ညာဖက်အစွန်းဆုံးထိ ရောက်အောင်သွားလိုက်ပါ Selection Cycling ဆိုတဲ့ Tab တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ဒီလိုလေး
နောက်အဲဒီ Tab ကိုဝင်လိုက်ရင် ဒီလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်
အဲဒီ ချက်ဘောက်စ် မှာ အမှန်ခြစ်ကို ဖျောက်လိုက်ပါ ဒီလို
နောက်ဆုံး OK နဲ့ ထွက်လိုက်ပါ။
ကျနော်အထက်ကပြောခဲ့ တဲ့ နှစ်ခုလုံးက အတူတူပါပဲ (အရာကြီးနဲ့ ဘာဘူကြီးပဲ) ကြိုက်တဲ့ ဟာကို သုံးလို့ ရပါ၏။
ကျနော်လို ရုံးမှာ အိပ်ပျော်ခြင်း ကင်းဝေးအောင် ဒီကောင်လေး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။(စကားချပ်။ ။အလုပ်က အရေး မကြီးဘူးဆို အကြောင်းပြချက် ပေးစရာရှိတယ် ပုံလေးလို့ ဆို အိပ်တာအိပ် အဲအရေးကြီးရင်တော့ ညစာထ္မင်းချိုင့် မှာပြီး ညမအိပ်ပဲ အားပေးနေရမယ်)
ကျနော်ကို အခုလို ရှင်းပြပေးခဲ့ကို အကိုတွေ အားလုံးကိုလဲ ဒီနေရာကနော် ကျေးဇူးတင် လေးစားလျှက်ပါ။
နောက် အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် တခြားအသစ်အဆန်းလေးတွေ ဝေမျှပေးကြပါအုန်းလို့ စောင့်မျှော်လျှက်ပါ။
2010 မှာေ၇ာ အဲလိုဖိုင်တအားလေးနေရင်ပြင်လို့၇ပါသလား။